ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် – Grab Love Story
ကျွန်မနာမည်က အေးမို့မို့။ ကျွန်မဟာ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်ခရိုင်က ကျေးရွာလေးတစ်ခုမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ အဖေအမေတို့က ဆန်စက်ထောင်ထားတဲ့သူတွေပါ။ ကျွန်မတို့ ဧရာဝတီတိုင်းဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးလို့တော့ လူတွေပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်။ နေထိုင်သူအများစုက လယ်ယာစိုက်ပျိုးတယ်။ ငါးဖမ်းထွက်ကြတယ်။ ကန်တွေ အင်းတွေနဲ့ တစ်ခြားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြတာပါ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ် စစီးတာလည်း ကျွန်မတို့ ပုသိမ်ခရိုင်က သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ပါပဲ။ အဖိုးရှိစဉ်အခါတုန်းက ‌ပြောပြတော့ ကြားဖူးတာပါ။ တကယ် ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ကျွန်မလည်း မမီလို့ မသိလိုက်ဘူးရှင်။ ဆန်စက်သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးဘဝမှာ ကျွန်မလည်း တော်တော်ကြီးကို အလိုလိုက်ခံရပြီး၊ တစ်မျိုးလုံးမှာလည်း တစ်ဦးတည်းသော မိန်းကလေးမို့ ကျွန်မရဲ့ဝမ်းကွဲအကိုတွေမောင်တွေရဲ့ အသည်းကျော် အချစ်တုံးကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဟာ ပညာရေးမှာတော့ ကံမပါပါဘူး။ကျွန်မ ဆယ်တန်းကို သုံးနှစ်ဖြေတာတောင် ကျလို့ နောက်ဆုံး စာမကျက်ချင်တော့တာနဲ့ ကျောင်းပညာရေးကို နားလိုက်ရတယ်။ မြို့မှာ ကျောင်းသွားတက်ပြီးသုံးနှစ်ကျ၊ နောက်ဆုံး ရွာပြန်ရောက်လာတော့ ကျွန်မအသက်က ဆယ့်ရှစ်ကျော်လို့ ဆယ့်ကိုးနှစ်တောင်ပြည့်ပါတော့မယ်။
မြို့မှာ အတန်းထဲက ကောင်လေးတွေနဲ့ ရည်းစားသနာထားခဲ့ဖူးပေမယ့် ရွာရောက်တော့ ကျွန်မဘယ်လိုမှ ရည်းစားထားလို့ မရတော့ပါဘူး။ ကျွန်‌မကို စာလိုက်ပေး ပန်းလိုက်ပေး၊ ရည်းစားစကားလိုက်ပြောတဲ့ ကာလသားတွေမှန်သမျှ ကျွန်မအကိုဝမ်းကွဲတွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ခြင်းကို ခံရတာနဲ့ အုတ်အော်သောင်းတင်းတွေဖြစ်ကုန်လို့ နောက်ဆုံး ကျွန်မအဖေက ကျွန်မကို အိမ်ထောင်ချပေးမှပဲ အားလုံးငြိမ်ကုန်ကြတော့တယ်ရှင်။ ကျွန်မအိမ်ထောင်ကျတော့ ကျွန်မအသက်က နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အဖေ့ရဲ့စီမံနေရာချထားပေးမှုအောက်မှာ အဖေနဲ့စီးပွားဖက် လယ်ပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့သားနဲ့ ကျွန်မဖူးစာဆုံခဲ့ရပါတော့တယ်။ ကျွန်မယောက်ျားနာမည်က ကိုညိုမင်းလွင်တဲ့။ နာမည်ကသာ ညိုတာပါ။ လူကတော့ အသားဖြူပြီး အရပ်ရှည်ရှည် ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ပါ။ ဘာကို သဘောကျလို့လဲတော့မသိဘူး၊ သူက ဆံပင်ကို အရှည်ကြီးထားတာမို့ ဆံပင်က ကျောလယ်လောက်နဲ့ဆိုတော့ ခါးအောက်ပိုင်းလောက်ရှိတဲ့ကျွန်မဆံပင်တွေလောက်နီးနီးကို ရှိပါတယ်။ လူက အရပ်ရှည်ရှည် ဒေါင်ကောင်းကောင်း၊ မျက်နှာသွယ်သွယ်၊ နှာတံကလည်း ဖြောင့်စင်းပြီး မျက်ခုံးထူထူနဲ့ဆိုတော့ သူ့ပုံစံနဲ့သူ ကြည့်ကောင်းပါတယ်ရှင်။ ထူးခြားတာက သူ့မျက်လုံးတွေ။ သူ့မျက်လုံးတွေက တကယ့်ကို တည်ငြိမ်ပြီး စူးရဲတယ်။ သိမ်းငှက်မျက်လုံးဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာနေမှာပါ။ နားနှစ်ဖက်မှာလည်း စိန်နားတောင်းနဲ့၊ လူက နှုတ်ခမ်းမွေးစစနဲ့ဆိုတော့ အဖေက သူ့ကို မြန်မာ့ယောက်ျားကောင်းလို့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်နဲ့ ပုဆိုးကို ညီနေအောင်‌ဝတ်ထားပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေတတ်တယ်။ စကားပြောလည်း ပြတ်တယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်လည်း တိကျပြီး လူကြီးမိဘပေါ်‌လည်း ရိုသေတော့ အဖေတို့အမေတို့က သိပ်ကိုသဘောကျကြပါတယ်။
သူတို့သဘောကျလို့လည်း ကျွန်မနဲ့ လက်ထပ်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ညားကာစကတော့ ကျွန်မက သူ့ကို ကိုညိုမင်းလွင်လို့ပဲခေါ်တာပါ။ နောက်ကြာလာတော့မှ လင်မယားသံယောဇဉ်ရယ်၊ ကျွန်မက ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ် ပြန်ကြွေနေခဲ့တာကြောင့် ကိုကို လို့ပဲ သူ့ကိုခေါ်ပြီး ‌အမြဲတမ်းချွဲနေရတော့တာပါပဲရှင်။ ကိုကိုဟာ ကျွန်မထက် ခြောက်နှစ်လောက်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်မကို သိပ်အလိုလိုက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ ဒုတိယဖခင်တစ်ယောက်လို ကျွန်မဆိုးသမျှ အနွံအတာလည်း ခံရှာပါတယ်။ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ပက်သက်ရင်လည်း သင်္ချာအထူးပြုနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတာပါ။ အဲ့လိုယောက်ဖမျိုးကျတော့ အမြဲတမ်းနီးပါး ထန်းရည်မူးအရက်မူးနေတဲ့ ကျွန်မအကိုဝမ်းကွဲတွေဟာ ရန်လုပ်ဖို့နေနေသာသာ သူ့ရှေ့ရောက်ရင် အပိုးကို ကျိုးလို့ပါပဲ။ အမြဲတမ်း ယောက်ဖ၊ ယောက်ဖနဲ့ သူ့တို့သောက်သမျှ အရက်ဖိုးအကြွေးတွေ လာလာဆပ်ခိုင်းတာ။ သူတို့ပိုက်ဆံပြတ်ရင် အိမ်ရောက်လာပြီး ယောက်ဖရေ ဘာညာနဲ့ မျက်နှာချိုသွေး။ ပြီးရင် ပိုက်ဆံချေးတော့တာပဲ။ တစ်ခါမှလည်း ပြန်မရပါဘူး။ ကိုကိုကသာ သဘောကောင်းပြီး တောင်းသမျှပေးနေတာ၊ ကျွန်မကတော့ စိတ်ကို တိုလိုက်တာဆိုတာ။ ဟုတ်တယ်လေ၊ ကျွန်မကိုကိုက ပိုက်ဆံရှာဖွေနေတာ ကျွန်မအတွက်ပဲလေ။ သူတို့ အရက်သောက်ဖို့မှ မဟုတ်တာ။ ကိုကိုမရှိချိန် ရောက်လာရင် ကျွန်မက အော်လွတ်တာပဲ။ အဲ့ဒီ့ကျရင် “နင်က ငါ့ညီမဖြစ်ပြီးတော့ ငါ့ယောက်ဖလောက်တောင် ငါတို့ကိုမချစ်ဘူး၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ငါတို့ ချီပိုးပြီးထိန်းခဲ့သမျှကို ကျေးဇူးကန်းတယ်” ဘာညာနဲ့ ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ပြောပြီး ပြန်သွားတာပဲ။
အင်း. . . သူ့ယောက်ဖပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ တန်းပြီးရောက်ချလာပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီ့မှာ။ ပြီးရင် ကိုကိုကလည်း တောင်းသမျှထုတ်ပေး၊ “အရမ်းကြီးတော့ မသောက်ပါနဲ့အကိုတို့ရာ” လို့တစ်ခွန်းတည်းပြောတာ။ အဲ့ဒီ့အချိန်ကျရင် သူတို့တွေက ” ငါသိပါတယ်ယောက်ဖကြီးရာ၊ အကိုကြီးတို့က နည်းနည်းပါးပါး ပျော်စေပျက်စေသောက်တာပါ။ ငါ့ယောက်ဖကြီးက အဲ့ဒါတွေ ချစ်ဖို့ကောင်းတာ။ ကိုကြီးတို့ကို စိတ်ပူပြီး အမြဲ မှာရှာတယ်။ ဟိုအငယ်မနဲ့များကွာပါ့။ အကိုတွေတစ်ခါတလေ လာလည်တာကို အော်လွတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာ၊ ဟွန်း။ သွားတော့မယ် ယောက်ဖကြီးရေ။ တော်ကြာ ငါအကြာကြီးစကားပြောနေလို့ မကြည်ဘဲ ထလာပြီး ပွစိပွစိလုပ်နေပါဦးမယ်။ နောက်ကျမှ တို့ညီကိုတွေ အေးဆေးစကားပြောကြမယ်။ သွားပြီဟေ့ ယောက်ဖကြီး။ ငါ့ညီကြီးလည်း ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ကွာ” ဆိုပြီး ပြောချင်ရာပြော၊ အရည်သောက်ဖို့ တန်းလစ်တော့တာ။ ကျွန်မကိုကိုက ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်။ သူတို့သာ အဲ့ဒီ့အရည်တွေသောက်ပြီး အစောကြီးသေမှာ။ ကျွန်မလည်း ကိုကို့ကို အားနာရပါတယ်။ မျက်နှာတွေလည်း ပူပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခါတိုင်း ကိုကိုက ကျွန်မနှာဖူးလေးကို နမ်းပြီး “အေးမို့လေးရယ်၊ ကိုကိုက ပိုက်ဆံလေး မုန့်ဖိုးပဲဖိုးလောက်ပဲ ပေးတာပါ။ ကိုကိုရှာသမျှက ဟော့ဒီ့က ကိုကို့မိန်းမ အေးမို့လေးအတွက်” ဆိုပြီး ကျွန်မကို ချော့မြှူကာ ကျွန်မနဲ့ ချစ်ရည်လူးတော့တာပဲရှင်။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မနွဲ့ဆိုး ဆိုးသမျှ၊ ကျွန်မအကိုဝမ်းကွဲတွေ ညာလှိုင်းဖားလျားပြီး ဆိုးသမျှအတိုးကိုရော ကျွန်မရဲ့အချစ်တွေရော တိုးရင်းပေါင်းပြီး ကိုကို့ရဲ့အလိုကျ ကာမဆန္ဒဖြည့်ဆည်းပေးရပါတော့တယ်ရှင်။ ကိုကို့မှာ အတန်းပညာရေးအပြင် နောက်ထပ် အထူးပြု ကျွမ်းကျင်တာ တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါက ကာမသျှတ္တရပညာ တဲ့။
ရှီးးးးအအာ ကိုကို့ ဟင်းးး အို ကိုကိုရေ အားးး‌ ကောင်းလား ‌မိန်းမ။ အင်း ကောင်းတယ်ကို ဆောင့်။ ကိုကိုနဲ့ကျွန်မ ညဘက်မအိပ်ခင်၊ ခြင်ထောင်ထဲမှာ ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုကို့ရဲ့ ခုနှစ်လက်မလောက်ရှိတဲ့ လိင်တံကြီးက ကျွန်မရဲ့ အင်္ဂါစပ်ထဲမှာ ဝါးလျားရှည်တစ်လုံးနဲ့ထိုးသွင်းထားသလိုပဲ။ ကျွန်မလည်း ကိုကို့ဟာကြီးကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေပါပြီ။ ညားခါစက တစ်ဆုံးထိ မခံနိုင်ဘူး။ အသားကုန် အော်ဟစ်ညည်းညူရင်း သူ့ကို အသနားခံရတာ။ ကိုကိုလည်း ကျွန်မကို သနားလို့နဲ့တူပါတယ်။ တစ်ဝက်လောက် မရှိတရှိလေးပဲထိုးသွင်းရင်း ကျွန်မကို သာသာလေးဆက်ဆံပေးရရှာတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုကို့ရဲ့ဟာကြီးကို တစ်နှစ်လောက် အကြာမှာ ခံနိုင်ရည်ရှိလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကိုက ကျွန်မနဲ့အခု အိမ်ထောင်သက် လေးနှစ်ကျော်တဲ့အထိ၊ ကျွန်မကို ဖြေးဖြေးပဲလိုးပေးပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြင်ကြင်နာနာနမ်းရှုံ့ရင်း တစ်အိအိနဲ့လိုးပေးတာမျိုးကို ကျွန်မတစ်ကယ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကြာလာတော့ ကျွန်မလည်း တစ်ခြားပုံစံမျိုးနဲ့ခံစားချင်လာတယ်။ ကိုကိုကတော့ ကျွန်မကို ပြောပါတယ်။ သူက နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်တတ်တယ်တဲ့။ မြို့ပေါ်တက်၊ ရန်ကုန်တက်၊ နယ်တွေခရီးသွားရင် သူ့စီးပွားဖက်တွေနဲ့ကိုကိုဟာ သောက်တတ်စားတတ်ပြီး မိန်းမတွေလိုက်စားပါတယ်။ ရွာပြန်ရောက်ရင်တော့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ထားပြီး ကျွန်မကို ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြင်ကြင်နာနာ ပြန်နေပေးပါတယ်။
ကျွန်မကိုပြောတာတော့ သူ့ရဲ့တင်းနေတဲ့ကာမစိတ်ကို ဖြေလျော့တာပါ၊ ချစ်တာက ညီမကိုပဲချစ်တာတဲ့။ တစ်သက်လုံးရိုးမြေကျပေါင်းသင်းသွားမှာပါ၊ အဲ့ဒီ့ဟာတွေက တစ်ခဏပဲ၊ ပြီးတာနဲ့ ခေါင်းထဲကရှင်းထုတ်လိုက်ပြီး ဘာမှ ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ ကျွန်မနဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို လုံးဝအစွန်းထင်းမခံဘူးတဲ့။ ကျွန်မတို့အိမ်ထောင်ရေးလည်း ဒီလိုနဲ့ နားလည်မှုရှိရှိ ရှေ့ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုကို့ကို အပြင်က ကောင်မတွေနဲ့ဆက်ဆံတာ အလိုမကျစိတ်ဖြစ်မိပေမယ့် သူပြန်ရောက်လာရင် အိပ်ယာထဲမှာ ကျွန်မကို ပွတ်သပ်နှိုးဆွရင်း သူနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့တဲ့မိန်းမတွေအကြောင်း ပြန်ပြောပြတော့ ကျွန်မလေ ကိုကိုလိုးတာခံချင်တဲ့စိတ်တွေ ထကြွသောင်းကျန်းလာတာ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရပါပဲ။ ကျွန်မက ကိုကိုရယ် အေးမို့မနေနိုင်တော့ပါဘူး လိုးပေးပါတော့ လို့တောင်းဆိုမှ ကျွန်မကို သူ့ဟာရှည်ရှည်ကြီးနဲ့ တစ်အိအိလိုးပေးပါတော့တယ်။ အရသာ သိပ်ကိုထူးတာပါပဲရှင်။ အိမ်ထောင်စကျကတည်းက အခုချိန်အထိ ပုံမှန်နည်းရိုးကြီးနဲ့ပဲ မှောက်ခုံလုပ်လေ့ရှိပြီး တစ်ခါမှ တစ်ခါတည်းသာ ကျွန်မတောင်းဆိုလွန်းလို နည်းလမ်းအသစ်နဲ့ တစ်ပေါင်ကျော် တစ်ခါလိုးပေးဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီ့တုန်းကဆိုရင်လေ ကျွန်မမှာ ကောင်းလိုက်တာမှ အရည်တွေကို အိုင်ထွန်းပြီး၊ ပြီးသွားတာတောင် ငါးမိနစ်လောက် တစ်ဇတ်ဇတ်တုန်ယင်ပြီး အရသာခံစားနေရတဲ့အထိကို ကောင်းတာရှင်။ နောက်ကျတော့ ကျွန်မတောင်းဆိုပါသေးတယ်။
ကိုကိုက အဲ့လို လိုးမပေးဘူး။ အဲ့ဒီ့အခါကျရင် ကျွန်မက စိတ်ကောက်တော့တာပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ။ အပြင်ကဟာမတွေနဲ့ကျ နည်းလမ်းမျိုးစုံအကွက်မျိုးစုံနဲ့အားရအောင်လိုးပြီး အိမ်ကအတိအလင်းယူထားတဲ့မိန်းမကျတော့ အကွက်စုံထုတ်ဖို့နေနေသာသာ တစ်ပေါင်ကျော်တောင် တစ်ခါပဲလိုးပေးရတယ်လို့၊ စိတ်တိုစရာကောင်းလိုက်တာ။ ဒီလိုအခါမျိုးကျရင်တော့ ကိုကိုက သေသေချာချာဖြေရှင်းတတ်ပါတယ်။ “အေးမို့ရယ်၊ ကိုကိုတို့က ခဏတာတွေ့ပြီး ကာမဆက်ဆံတာမှ မဟုတ်တာ။ တစ်သက်လုံးအတူနေသွားရမယ့် လင်မယားတွေလေ” တဲ့။ “နည်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံပေးလို့ လေးငါးခြောက်နှစ်နဲ့ အကုန်စုံပြီးရိုးသွားရင် ကြာလာတဲ့အခါ ကာမစိတ်ခမ်းပြီး နောက်ပိုင်းသိပ်မလုပ်ချင်ဖြစ်သွားတတ်တော့ အိမ်ထောင်ရေးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အဖုအထစ်ဖြစ်စေတယ်”တဲ့လေ။ “အိမ်ထောင်သက် ကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်မျိုးတစ်မျိုး တိုးကာပေါင်းစပ်ရင်း အေးမို့ကို တစ်သက်လုံးမရိုးအောင် စွဲစွဲမြဲမြဲလိုးပေးချင်တာပါ။အဲ့ဒီ့အခါကျရင် သူလည်း တစ်ခြားဟာမတွေနဲ့ မလုပ်တော့ပါဘူး။ အပြင်ရောက်‌ရင်လည်း အသောက်အစား တစ်ခါ‌တလေတောင်မလုပ်ဘဲ ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီး အေးမို့ကို အတိုးချလိုးပေးပါ့မယ်”တဲ့။ ကျွန်မလေ ကျေနပ်လိုက်တာ။ ကိုကိုက သိပ်ကို အမျှော်အမြင်ကြီးတာပဲရှင်။ လုပ်နည်းပေါင်းစုံကျွမ်းကျင်ပါလျက်နဲ့ ကျွန်မကို အသက်ငယ်တုန်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပဲ နှိုးဆွပေးမယ်တဲ့။ နောက်ပိုင်း မရတော့မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်တွေနဲ့ တစ်ဖန်ပြန်လည်နှိုးဆွပြီး တစ်သက်မရိုးအောင် ထပ်လိုးပါ့မယ်တဲ့ရှင်။ အဲ့ဒီ့လိုပြောလိုက်တိုင်း ကျွန်မလေ စိတ်တွေအရမ်းဖြစ်ပြီး သူ့ကို ပေးလိုးတော့တာပဲ။အောက်ကနေ ခါးလှုပ်ပြီးပစ်ကော့ပေးမိတာ။ အရမ်းကောင်းတာပါပဲရှင်။ တကယ်တော့ ကိုကိုဟာ ကာမနည်းပညာကို ပါရဂူတန်းအထိ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာရှင်စစ်စစ်တစ်ယောက်ပါ။
ကျွန်မကို တစ်သက်တာစီမံကိန်းနဲ့ သေသေချာချာကို လိုးပေးနေတာပဲကြည့်လေ။ ကိုကို့ရဲ့ကာမစိတ်ပညာကို ကျွန်မ အလွန်ပင် ဩချရလောက်ပါတယ်ရှင်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခါ‌တစ်လေ ကိုကိုနဲ့ကျွန်မ လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားဆိုသလို အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့် စကားနည်းနည်းများတဲ့အခါ ကျွန်မက စိတ်တိုရင် နောက်ယောက်ျားနဲ့လင်ငယ်နေပစ်မယ် ဆိုပြီး စကားလုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်တော့ ကိုကိုက ကျွန်မလက်ကိုဆွဲပြီး အိမ်ခန်းထဲခေါ်သွားတယ်။ ပြီးရင် သူ့ရဲ့ ငှက်ကြီးတောင်ဓားကြီးကို အရှေ့ချပြီး “ငါမသိဘဲနင်အပြင်မှာ ကလေကဝကောင်‌နဲ့ခံရင် နင့်ကို ဒီဓားနဲ့ ငါကိုယ်တိုင်ခုတ်မယ်။ နင်အလိုးခံချင်ရင်ပြော။ နင် အပြင်ယောက်ျားနဲ့လိုးတာ ခံချင်လား။ ငါခေါ်လာပေးမယ်။ ငါကြည်ဖြူတယ်။ ငါမသိဘဲနဲ့တော့ နင်ဘယ်သူနဲ့မှ မခံနဲ့” တဲ့။ သူ့အပေါ်အချစ်မလျော့နဲ့တဲ့။ သူနဲ့ကျွန်မ အိမ်ထောင်ရေးကို လုံးဝအထိမခံနိုင်ဘူးတဲ့။ “နင်လိုးချင်တာ ဘယ်သူနဲ့လိုးချင်လဲ၊ ဘယ်လိုလီးမျိုးနဲ့လိုးချင်လဲပြော” ဆိုတာနဲ့ ကျွန်မလေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖျဉ်းတင်းတင်းဖြစ်သွားပြီး ဒေါသတွေဘယ်ရောက်မှန်းမသိ၊ ကျွန်မဟာလေးထဲက အရည်တွေထွက်လာပြီး ကျွန်မမှာ တွန့်လိမ်နေတာပဲ။ အဲ့ဒီ့အချိန် ကိုကိုက ကျွန်မမျက်လုံးကို အရိပ်ဖမ်းတတ်တယ်။ ကျွန်မကို ပွတ်သပ်နမ်းနယ်ရင်း လိုးပေးတော့တာပဲ။ ကျွန်မမှာ ခံလို့ကောင်းလိုက်တာရှင်။ အရှိန်တစ်ဝက်လောက်ရောက်ရင် “အခု မင်းကို ငါမဟုတ်ဘူး အပြင်လူ မင်းမသိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်က လာလိုးပေးနေတာ သိလား” လို့ ပြောတော့ ကျွန်မရင်ထဲ တုန်တုန်ယင်ယင်ကြီးဖြစ်လာပြီး ပါးစပ်ကလည်း ညည်းမိညည်းရာ ‌ညည်းညူလျက်သားနဲ့ အလိုးခံရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ အဲ့လိုမျိုးဆို ကျွန်မက နှစ်ချီလောက်ကို တန်းပြီးတတ်တာ။ ဆက်ဆံလို့လည်း အပြီး၊ ကျွန်မတို့ရန်ဖြစ်ထားတာလည်း ဘယ်ပျောက်လို့ပျောက်မှန်းမသိ၊ ကျွန်မထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေရော စိတ်ဆိုးတာတွေရော အရာအားလုံးပြေပျောက်ပြီး အားရကျေနပ်လိုက်တာရှင်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ကျွန်မနဲ့လုပ်ဖြစ်တိုင်း တစ်ခါတစ်ခါ သူမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူက လိုးနေပါတယ်ဆိုပြီး ပြောရင်း သူ့ဟာကြီးနဲ့လုပ်တတ်တာ။ အဲ့လိုမျိုးဆို သူ့ဟာကြီးက တင်းမာလာပြီး ရွာမှာငရုတ်ထောင်းတဲ့ ခြေနင်းမောင်းတံက ကျည်ပွေ့ကြီးလို ကျွန်မရဲ့ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကိုကိုင်ကာ၊ တစ်ဇောင့်ဇောင့်နဲ့ ဆောင့်ချတော့တာပါပဲရှင်။ ကျွန်မလေ ကိုကိုမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားလူတစ်ယောက် ကျွန်မကိုဆောင့်ချနေတယ်ဆိုတဲ့ အာရုံတစ်မျိုးရပြီး အရည်တွေပိုရွဲလာတတ်တယ်။
သူ့ကျောကိုအတင်းဆွဲဖက်ကာ အောက်ကကော့ထိုး၊ မချိတင်ကဲ အလိုးခံနေရတော့တာပါပဲရှင်။ ကိုကိုက နောက်ပိုင်းကျတော့ အဆင့်ပိုပိုတိုးလာတယ်။ ကျွန်မကို တစ်ခြားယောက်ျားနဲ့ တစ်ခါလောက် ခံဖူးချင်လားတဲ့။ ကျွန်မ ဘာပြောကောင်းမလဲ လိုးနေတဲ့အချိန်ဆို သူ့ကိုပြန်ပြောပစ်ချင်တာ။ “အခုချက်ချင်း အေးမို့ကို ဆွဲလိုးမယ့်သူရှိရင်ခေါ်လာခဲ့၊ အလိုးခံပါ့မယ်” လို့ စိတ်ထဲကပဲ ကြိတ်‌ပြီးပြောနေရပါတယ်။ တကယ့်အပြင်မှာတော့ “မကောင်းပါဘူး ကိုကိုရယ် မသင့်တော်ပါဘူး” လို့ပဲ ပြန်ပြောမိတယ်။ ကိုကိုက တစ်ခါပဲလေ တဲ့။ အထူးအဆန်းဖြစ်အောင် ဆက်ဆံကြည့်ပါ့လား လို့ ပြောတယ်။ “ကိုယ်တို့အိမ်ထောင်ရေးမထိခိုက်ပါဘူး။ တစ်ခါ‌ပဲတွေ့ပြီး နောက်တစ်သက်လုံးမတွေ့ရတော့မယ့်လူမျိုးဆိုရင် မကောင်းဘူးလား” တဲ့။ အဲ့လိုကျတော့ ကျမစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ပြီးမှ ကိုကိုက အေးမို့ကို မချစ်လို့လား ဆိုတော့ “ချစ်လို့အေးမို့လေး တစ်သက်မှာ တစ်ခါလောက်အသစ်အဆန်းကြုံဖူးအောင်၊ အေးမို့ကို ‌နောက်ပိုင်းထုတ်သုံးလာမယ့် နည်းလမ်းတွေအတွက် ကြိုပြီး မြေစမ်းခရမ်းပျိုးတာပါ” တဲ့။ သူမက်လုံးပေးနေတာပါ။ ကျွန်မသိသားပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ထဲကလည်း သူပြောသလို နောက်တစ်ယောက်က လုပ်တာခံချင်လာမိသလို နောက်ပိုင်းသူထုတ်သုံးလာမယ့် ကာမနည်းပညာတွေကို မြန်မြန်ပိုပြီး မျှော်လင့်မိပါတော့တယ်ရှင်။ အဲ့ဒီ့အခါမျိုးကျတော့ သူနဲ့ဆက်ဆံနေလျက်သားကျမကိုယ်လေး အသားကုန်ယားတက်လာကာ ရှီးးးးကိုကိုရယ် မြန်မြန်လုပ်ပါလို့ အာ့ အားးရှီးးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်။ “အေးမို့” “ရှင် ကိုကို” “ကိုကိုပြောတာ လက်ခံလား” “အေးမို့စိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ် ကိုကိုရယ်” “ဘာလို့လဲ။ အေးမို့ လုံးဝစိတ်မဝင်စားလို့လား။ အေးမို့စိတ်မပါရင် ကိုကိုဘာမှမလုပ်ဘူးနော်။” “အဲ့လိုလည်း မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရယ်။ အေး‌မို့လေ။ အေးမို့ ဟို နည်းနည်း၊ နည်းနည်းတော့ စိတ်ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အေးမို့ ကြောက် ကြောက်နေတယ် ကိုကို။” “ကိုကိုသိပါတယ် အေးမို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတာကို။ ဒါပေမယ့် ဟိုရောက်ရင် အစစအရာရာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ကိုကို စီစဉ်တာ ဘယ်နှစ်ခါ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းလုပ်လို့လဲ။” “ကိုကို့ကို အေးမို့ယုံပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရင်ထဲ တမျိုးကြီးပဲ ကိုကိုရယ်။ အားးကိုကို လုပ်လုပ် လက်ကမြန်မြန်လုပ်ပေး။ ” “အားးအအားးး ဟင်းဟင်း သွက်သွက်လေးကိုကို အေးမို့ ပြီးတော့မယ်။ နမ်းမယ် နမ်းချင်တယ်ကိုကို အားးး ရှီးးး” ပလွတ် ပလွတ် ရှီး အအာအား ကိုကို့ လက် လက်က မြန် မြန်မြန်လေး လေး ရှီး အားးး “ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်။” စကားပြောနေရင်း အငြိမ်မနေတတ်တဲ့ ကိုကို့လက်ကြောင့် အေးမို့ရဲ့ပိပိလေး အရည်တွေ ရွမ်းရွမ်းစိုပြီး ပြီးဆုံးခြင်းကို ရောက်ခဲ့ရပြန်တယ်။ ………… “ဖြစ်ပါ့မလား ကိုကိုရယ်။ အေးမို့တော့ လန့်တယ် ကျောချမ်းနေသလိုပဲ။ နောက်ပြီး ဒီလူက ဒီမှော်ဘီဘက်မှာ နေတာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ” “အေးမို့ရယ်။ အဲ့လူက စစ်ကိုင်းဘက်ကပါ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ဒီလူ့ကို ကိုကိုမြင်ဖူးပါတယ်။ နောက်ပြီး လူပျိုကြီးပါ။ ကိုကို သေချာမှ စီစဉ်တာ။ ” “အဲ့လူကရော ကိုကို့ကို သိလား။” “သူကတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုစုံစမ်းထားတာ။ သူ့အကြောင်းတွေကိုလည်း ကိုကို အကုန်သိပြီးသား။ ဖုန်းထဲမှာ ရင်းနှီးတယ်။ ကိုကို့ကိုသာ သူမသိတာ။ ” “အင်းပါ ကိုကို။ အခု ဒီအိမ်က ဘယ်လိုရလာတာလဲ။ ” “အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ တစ်လလောက်ပဲနေမှာဆိုပြီး ဈေးလေးနည်းနည်းပိုပေး ငှားထားတာပါ။ ဒါပြီးရင် အေးမို့ကို ကိုကို ရွာပြန်လိုက်ပို့မယ်။ နောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှ ကိုကို ဒီပြန်လာပြီး အလုပ်ကိစ္စ၊ တွေ့စရာရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့မယ်။ လေးငါးရက်ပါပဲ။ ဒီမှာ လုပ်စရာတွေပြီးတာနဲ့ ရွာကို ပြန်လာခဲ့မယ်။
အခု ဘယ်လိုလဲ အေးမို့။ ကိုကို သွားခေါ်ရတော့မလား။ ” “အင်း ကိုကို။ ဟို ဟိုလေ မနေ့ကတည်းက ဒီအိမ်ရောက်နေတာ။ ကိုကိုပြောသလို မလုပ်ခင် ဒီ ဒီမှာ ကိုကိုနဲ့ အရင်” “ဟားဟား ငါ့မိန်းမရယ်။ ချစ်စရာလေး။ ပြောနေတာလေးက ကိုကို အသည်းတွေ ယားလာပြီ။ ” ပြွတ် ပြွတ် “အင်း ကိုကိုရယ် ကိုကို့နှုတ်ခမ်းက ပိုချိုလာသလိုပဲ။ အွန့်အွန်း ရှီးးး ကိုကိုရေ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အားးး” ………… ကျွန်တော့်နာမည် ညိုမင်းလွင်ပါ။ ကျွန်တော့်အကြောင်းတော့ ခင်ဗျားတို့ သိလောက်ရောပေါ့။ ကျွန်တော် ကိုယ့်မယား သူများလိုးခြင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းလည်း ရိပ်မိလောက်ပြီ။ အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတော့လည်း ကျွန်တော့်မိန်းမ အလုပ်ခံနေရတာမျိုး သေသေချာချာကြည့်ချင်လာတယ်ဗျာ။ ဘေးနားကနေ အပြာကားကြည့်သလိုမျိုး‌ပေါ့။ ပြီးတော့ မင်းသမီးနေရာမှာက ကိုယ့်မိန်းမ၊ မင်းသားနေရာမှာက သူစိမ်းတစ်ယောက်၊ ကျွန်တော်က ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့သူပေါ့။ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ကာမဆက်ဆံအပြီး အဆိပ်တက်နေတဲ့ပုံစံကို ကြည့်နေရတာမျိုး ကျွန်တော်လိုလား လာတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့လုပ်နေချိန်ကျ ပွဲကြည့်ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုမျိုးမရဘူးလေ။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်လုံးချင်း အရမ်းနီးကပ်ပူးနေတော့ ဘေးနားက လူတစ်ယောက် ကြည့်ရတဲ့ မြင်ကွင်းလို အစစအရာရာ သေချာပိုင်နိုင်မှု မရှိဘူး။ မိန်းမကို တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျုံးသွင်းလာခဲ့ရတာပါ။ နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဒီကိစ္စတွေပြန်ပြောနှိုးဆွရင်း သူနဲ့ နည်းမျိုးစုံ ဆက်ဆံမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာပဲ။ တစ်ခါတလေကျ အေးမို့ကို ကျွန်တော် ပုံစံအစုံနဲ့လုပ်ချင်ပေမယ့် စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရတယ်။ ကြာလာရင် လင်မယားချင်း ရိုးသွားမှာစိုးလို့ပါဗျာ။ တစ်သက်လုံး သူနဲ့ ကာမအရသာကို မရိုးအီလှအောင် ခံစားချင်တာပါ။
ဒီနေ့ ကျွန်တော့်မိန်းမ ဝတ်ထားတာလေးကလည်း တော်တော်လေးယဉ်ပြီး မျက်လုံးထဲ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းနေတာဗျာ။ အေးမို့က အသားဝင်းတယ်။ ဖြူတာလည်းမဟုတ် ညိုလည်းမညို အသားလတ်လတ်လေးနဲ့ ဝင်းနေတာမျိုး။ အဝါခပ်ရင့်ရင့် နနွင်းညိုရောင် ချည်သားဝမ်းဆက်လေးနဲ့၊ ဆံပင်လေးတွေကို သိမ်းစုစည်းပြီး အနောက်ကို လျားချထားတာ။ ဆံပင်လေးက ခါးအောက်ပိုင်းလောက်ရှိတာဆိုတော့ မြင်းမြှီးလေးကျနေတာပဲ။ သူက နှာတံစင်းစင်း မျက်နှာသွယ်သွယ် မျက်ခုံးပါးပါး ရေးရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ မျက်ဝန်းသွယ်သွယ် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူး မေးချွန်းချွန်းလေးနဲ့ဆိုတော့ သူဝတ်ထားလေးနဲ့က တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ခါးလေးက ကျဉ်ပြီး အနောက်ကိုကော့နေတာ၊ သူ့အိုးလေးက ကားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အိုးကြီးမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ တင်းတင်းပြည့်ပြည့်နဲ့ လုံးလုံးလေး။ အတွင်းခံလေးဝတ်ထားတာရယ် အပေါ်က ထဘီကိုလည်း ကျပ်ကျပ်လေး စည်းနှောင်ထားတော့ အိုးလေးမှာ အစင်းကြောင်းနှစ်ခု ထင်းနေရုံဘယ်ကမလဲဗျာ အပေါ်ဗိုက်သား ခါးသားရည်ကြိုးလေးကအစ ထင်းနေတာပဲ။ အဲ့ဒီ့အပေါ် လက်သုံးလုံးလောက်အကွာကျမှ ထဘီလေးက အထက်ဆင်အနက်လေး ရေးတေးတေးနဲ့ ခါးသိမ်သိမ်လေးထဲ နစ်မြုပ်ဝင်နေပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စည်းနှောင်ထားတော့ သူ့အတွင်းခံအောက်က အိုးလေးက လုံးတစ်ပြီး အတွင်းခံအရွယ်အစားကအစ အကုန်လုံး ပုံစံအတိအကျ ပေါ်နေတာပဲဗျာ။ အထဲက အတွင်းခံဝမ်းဆက် မိုးပြာရောင်လေးဟာ ခပ်ရေးရေး မှိန်မှိန်လေးပေါ်နေတာ တကယ့်ကို လိင်စိတ်ကြွဖွယ်ရာလေးပါ။ အဲ့ဒီ့အပေါ်မှာ ခါးလေးက အပေါ်ကို ပြေပြေလေးတက်သွားတာ။
ကျောလယ်ညှပ်ရိုးအောက်နားလေးမှာလည်း သူ့ဘရာအရာလေးကို အင်္ကျီကျပ်ကျပ်လေးက ပုံဖော်ထားတယ်။ နို့လေးကလည်း ဘရာအုံ အမာစားလေးအောက်မှာ လုံးဝန်းဝန်းလေးဆိုတော့ သူ့လက်မောင်းသွယ်သွယ် ပေါင်တံစင်းစင်းလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်မြင်ရတာ သိပ်ကို အသည်းယားပြီး ကိုင်ဆောင့်ပစ်ချင်စရာလေး ဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားနေရတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ အေးမို့တော့ ခဏနေရင် အပြင်လူတစ်ယောက် လိုးတာခံရတော့မယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီရက်ပိုင်း သူ့ကို မဆက်ဆံထားဘူး။ တစ်ပတ်ကျော်လောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းလောက်ပဲ နမ်းပြီး လက်ခလယ်နဲ့ ပြီးအောင် ဆွပေးထားတာ။ အခု အပြင်ထွက်ပြီး ဟိုလူနဲ့ချိန်းထားတာ သွားခေါ်မလို့ကို သူစိတ်နည်းနည်းထနေတာနဲ့ အသာလေး နှုတ်ခမ်းဆွဲစုပ်ပြီး မချင့်မရဲဖြစ်အောင် လက်နဲ့ကလိထားခဲ့ရတယ်။ ဟိုလူကတော့ မှော်ဘီဈေးရုံရှေ့နားမှာ စောင့်နေတယ်လို့ ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြောတာပဲ။ ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ လိုးမယ့်လူပေါ့ဗျာ။ ………… နှင်းမို့ ကိုကိုထွက်သွားတော့မှပဲ တစ်ယောက်တည်းပျင်းနေတာနဲ့ ဒီအိမ်အနေအထားကို လိုက်ကြည့်မိတယ်။ ဒီအိမ်လေးက မှော်ဘီဘက်မှာပါ။ ခြံကတော့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းလေးပါပဲ။ ပေခြောက်ဆယ်ပတ်လည်လောက်ရှိတယ်။ တိုက်ပုလေးတစ်လုံးပဲ ဆောက်ထားတာပါ။ ခြံက အုတ်တံတိုင်းကာထားတာ အမြင့်ခြောက်ပေလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ အပေါ်မှာ သံဆူးကြိုးခွေတွေနဲ့။ အိမ်ဘေးမှာ စိုက်ခင်းလေးရှိတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ ချဉ်ပေါင်တို့ စိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ ခြေရင်းဘက် ခြံစည်းရိုးနားမှာလည်း မာလကာပင်လေး နှစ်ပင်၊ အနောက်ဘက်ထောင့်မှာ သရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်နဲ့ ဗူးစင်ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိ‌ပါတယ်။
အိမ်ရှေ့မှာတော့ သပြေပင်‌ခပ်လတ်လတ်လေးတွေရယ် အလှစိုက်ပန်းအိုးတွေ တွေ့ရတယ်။ ဂမုန်းတို့၊ နှင်းဆီတို့၊ သစ်ခွပန်း လေးငါးမျိုးလောက်နဲ့ တကယ်တော့ ဒီခြံလေးဟာ နေချင်စဖွယ်လေးပါ။ ကိုကိုက စိတ်ကူးသိပ်ကောင်းတာပဲ။ သူလည်း ဒီခြံနဲ့အိမ်ကို ငှားရတာ ဈေးကတော့ ‌တော်တော်ပေးရမယ် ထင်တယ်။ ခြံလေးက သာယာအေးချမ်းသလောက် ကျွန်မရင်ထဲတော့ ဆူပူနေတာပါပဲရှင်။ တစ်လှပ်လှပ်ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ရင်တွေတုန်လို့ ကျွန်မရဲ့ ပိပိလေးထဲမှာလည်း အရည်လေးတွေက နည်းနည်း စိုတိုတိုနဲ့ ကျွန်မရင်ထဲ ကာမဂုဏ်မီးအပျိုးတွေ ဖွဲမီးလို တစ်ငွေ့ငွေ့လောင်မြိုက်နေဆဲပေါ့ရှင်။ ခုနှစ်နာရီထိုးကာနီးကျတော့ ကိုကိုနဲ့အတူ လူတစ်ယောက်ပါလာတယ်။ အရပ်ပုပု အသားမည်းမည်းနဲ့ ရုပ်က အညာသားရုပ်လိုပဲ။ ကျွန်မရှက်နေလို့ သူ့မျက်နှာကို သေချာမကြည့်ရဲခဲ့ပါဘူး။ တီရှပ်အနက်ရောင်နဲ့ ဘောင်းဘီကဂျင်းအပျော့သား အုတ်ခဲကျိုးအရောင် ကွာတားဘောင်းဘီလိုမျိုး ဝတ်ထားတယ်။ သူ့ခြေထောက်မှာလည်း ခြေသလုံးမွေးတွေက ထူလပျစ်ကြီး။ လူက ကိုယ်လုံးတုတ်တုတ် သန်သန်မာမာနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲ ဒီလူက ခဏနေရင် ငါ့ကိုလိုးမှာပါ့လား ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတော့ ကျွန်မဒူးတွေ ညွတ်ခွေကျချင်လာသလိုပဲ ကတုန်ကယင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မလေ ကျွန်မ. . . …….. ကျွန်တော့်မိန်းမကတော့ ရှက်နေတယ်နဲ့တူပါတယ်။
ဟိုလူနဲ့ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူး။ သူအနောက်ခန်းထဲဝင်နေမယ်လို့ပြောနေတာနဲ့ ရဲရဲတင်းတင်းဖြစ်လာအောင် ကျွန်တော့်ဘေးနားခေါ်ထားပြီး စပျစ်ဝိုင်နည်းနည်း တိုက်ထားရတယ်။ ဟိုလူကလည်း အဲ့ဒါကို အကဲခတ်မိတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ မသိလိုက် မသိဘာသာပဲနေတာပါ။ စိတ်ထဲတော့ ဒီလူ မဆိုးပါဘူးလို့ အမှတ်ပေးမိတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလူနဲ့ ကျွန်တော် ဘီယာဆိုင်တစ်ခုမှာ သောက်စားရင်းနဲ့ ရင်းနှီးသွားတာပါ။ သူနဲ့အတူတူ အဲ့ဒီ့ညက သောက်စားပြီး စော်သွားချကြတာ။ အဲ့‌ဒီ့နောက်ပိုင်း ဖုန်းနံပါတ်ချင်း လဲလာခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်း ဒီလူနဲ့ တစ်ခါနှစ်ခါလောက် ထပ်ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ့ဘက်ကို တမင်စိတ်ပြေလက်ပျောက်သွားလည်ရင်း ရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ နောက်လည်း ကြုံစရာမလိုဘူးလေ။ တွေ့စရာလည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒီကိစ္စပြီးရင်လည်း ဒီလူ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ဘလော့ရုံပါပဲ။ ဒီလူက ရည်ရည်မွန်မွန်နဲ့မို့ နည်းနည်းတော့စိတ်ချရပါတယ်။
အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်တာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရည်ရည်မွန်မွန်နေထိုင်တဲ့ယောက်ျားတွေက ပိုထန်တတ်တာမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလိုပဲလေ။ တကယ်တမ်းကျ မိုးလားကဲလား အပြောကြီးတဲ့ကောင်တွေသာ အဖြစ်မရှိတာပါ။ ကျွန်တော် ဒါကိုကောင်းကောင်းသုံးသပ်မိတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီလူ့ကိုခေါ်လာတာပါ။ ဒီလူကလည်း လူမှူရေးမညံ့ဖျင်းပါဘူး။ အရက်ကောင်းကောင်း နှစ်လုံးလက်ဆောင်ဝယ်လာတယ်။ တန်ဖိုးကတော့ မနည်းပါဘူး။ နောက် ရမ်တစ်လုံးဝယ်လာတယ်။ ဒီည ကျွန်တော်တို့သောက်ဖို့တဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ အေးမို့အမြည်းလုပ်နေရမှာစိုးရိမ်တာကြောင့် လမ်းမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲဝင်၊ အမြည်းလေးဘာလေးမှာရင်း နည်းနည်းကြာသွားတာ။ ဒီရောက်တော့ တစ်ခါတည်း တန်းသောက်ရင်း စကားလေးဘာလေးပြောတော့ မိန်းမနဲ့သူနဲ့လည်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သွား‌တာပေါ့ဗျာ။ အခုဆို မိန်းမက နည်းနည်းရှက်နေတော့ ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ကျွန်တော့်လက်ကိုကိုင်ရင်း သူ့အတွက်ထားပေးထားတဲ့ဝိုင်လေး နည်းနည်းပါးပါးသောက်ရင်း ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာကို နားထောင်နေတယ်။
ဟိုလူကလည်း အစက အိုးတို့အမ်းတမ်းဖြစ်နေပေမယ့် အခုတော့ သောက်ရင်းစားရင်း စကားတော့ နည်းနည်းဖောင်ဖွဲ့လာပါပြီ။ လူကတော့ နည်းနည်းအေးတယ်ဗျ။ “ကိုထွန်း၊ ခင်ဗျားက အခုလူပျိုကြီး‌ဆိုတော့ အရင်တုန်းက ရည်းစားတွေဘာတွေတော့ ထားဖူးမှာပေါ့” “ဟုတ်၊ ထားဖူးတာပေါ့ အကိုရာ။ အားလုံးပေါင်း လေးယောက်အထိကိုထားဖူးတယ်။” “ဟားဟား။ ပြောစမ်းပါဦးဗျ။ ခင်ဗျား ရည်းစားတွေနဲ့ အကြောင်းလေးတွေ” “ကျွန်တော် ပထမရည်းစားဦးနဲ့က ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ။ မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဆိုတာက ဟိုကိစ္စကို ပြောတာပါ။ အဲ့ဒီ့တုန်းက လူကလည်း ငယ်သေးတော့ သူကလည်းရည်းစားဦးဆိုတော့ အသည်းပေါက်မတတ် ဖူးဖူးမှုတ်ပေါ့ဗျာ။မထိရက် မကိုင်ရက်နဲ့။ အခုများကျတော့ အဲ့ဒီ့မိန်းကလေးလည်း ကလေးသုံးယောက်နဲ့ဗျို့။ အငယ်လေးတောင် လေးနှစ်သားရှိနေပြီ” “ဟားဟား။ ဟား တကယ်ပဲဗျာ။ အခုတော့ ခင်ဗျားရည်းစားဦးက တစ်ခြားလူကို သွားမှုတ်နေတာပေါ့ ဟားဟား” “ဟား ဆိုပါတော့ဗျာ ဟီး” ဟိုလူက ခေါင်းကုတ်‌ပြီး ရယ်ကျဲကျဲ‌နဲ့ဆိုတော့ ဘေးနားက ကျွန်တော့်မိန်းမလည်း ခွိကနဲ အသံထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တာ ဒါမျိုးလေ။ “နောက်တစ်ယောက် ကျတော့ရော ” “အင်းနောက်တစ်ယောက်ကျတော့ ဂျပုမလေး။ ဝဝလေးပါ။ သူနဲ့တော့ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူ့အိမ်ကလည်း အဲ့တုန်းက ပိုက်ဆံရှိတော့ သဘောမတူတာနဲ့ ကွဲခဲ့ရပြန်ပေါ့” “ရင်နာစရာလေးတွေပေါ့” “နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ဗျ၊ သူက စိတ်ကြီးတယ်။ တစ်ခုခုဆို အော်ဟစ်သောင်းကျန်းတတ်တော့ ကြာတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒဏ်မခံနိုင်တော့ ထားခဲ့ရပြန်တာပဲ။ နှစ်နှစ်လောက်နဲ့တောင် ဒဏ်မခံနိုင်တာ။ တစ်သက်လုံးဆို ကျွန်တော့်ဘဝ ခါးပြီပေါ့ဗျာ။
“အင်း ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျားပြောတာ” “လေးယောက်မြောက်ရည်းစားကတော့ဗျာ” “အင်း ဘာဖြစ်လဲ” “ထန်တာ ထန်တာဆိုတာ ကျွန်တော့်မှာ မနည်းဖြိုရတယ်။ သူနဲ့ကျမှပဲ ကျွန်တော်လည်း လုပ်နည်းပေါင်းစုံ အကုန်စုံတော့တယ်။ သူ့ကြောင့် ဘယ်မိန်းမမဆို မကြောက်ဘဲနဲ့ တစ်ဝကြီးလုပ်နိုင်တာဗျ။” ဒီစကားလည်း ကြားရော ကျွန်တော့်မိန်းမကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးလေးပြူးပြီး ကြက်သီးမွေးညှင်းလေးတွေထနေတာ အဖုလေးတွေတောင်မြင်ရတယ်။ “ခင်ဗျား သူနဲ့ ဘယ်နှစ်ခါလောက် လုပ်ဖူးခဲ့လဲ။” “တွဲခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် မှန်းခြေ အကြိမ် ခုနှစ်ဆယ်ထက်တော့ မနည်းလောက်ဘူးထင်တာပဲ။ သူက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ ဗိုလ်တစ်ယောက်နဲ့ညားသွားတာ။ အခုတော့ ကတော်ဖြစ်နေပါပြီ။” “ဟားဟား။ လောကကြီးက ဒီလိုပါပဲဗျာ။ ခင်ဗျား အချစ်နဲ့ကာမကိုရော ဘယ်လိုထင်လဲ။” “ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ဗျာ၊ အဲ မှားရင်လည်း မှားမှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကျတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒီလိုဗျ။ ကျွန်တော်က အချစ်ဆိုတာတော့ မပြောချင်ဘူး။ သူဟာ အင်မတန် နက်ရှိုင်းဆန်းကြယ်တယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ တူညီလေ့မရှိဘူး။ ဒီတော့ ကာမရှူ့ထောင့်နဲ့ပဲ ပြောချင်တယ်။ အချစ်ပါသောကာမ နဲ့ အချစ်မပါသောကာမပေါ့ဗျာ။ အချစ်ပါသောကာမဟာ ပိုချိုမြိန်ပြီး အဆုံးသတ်လေ့မရှိဘူး။ အချစ်မပါသောကာမဆိုတာက တုံ့ပြန်မှု အင်မတန်မြန်ဆန်တယ်။
ချက်ချင်း ဟုန်းကနဲ ထကြွဆူပူလာပြီး ကိစ္စပြီးသွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ပြန်အေးစက်သွားတာမျိုး။ ကျွန်တော် ဒီလောက်ပဲ သိတယ်။” “ဟုတ်ပြီဗျာ။ ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောမယ်နော် ကိုထွန်း။” “ဟုတ် အကို ပြောပါ။” “ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒီည ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စကို အကုန်လုံး သဘောပေါက်ပြီး‌ဖြစ်မှာပါနော်။ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလား။” “ဟုတ် ရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလည်း အဆင်ပြေရင် အားလုံး သက်တောင့်သက်သာပါပဲ။” “ဟုတ်ပြီ။ ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော့်မိန်းမအလှည့်။ ကဲ မိန်းမ ဘယ်လိုလဲ။ ခဏတာ လက်ခံနိုင်လား။” အေးမို့ကို မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ဟုတ်။ ဟုတ် ကိုကို။ လက် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ သောက်တာလည်း အရှိန်နည်းနည်း ရနေပြီဆိုတော့ လူချင်း နေရာလဲလိုက်ရအောင်ဗျာ။ ကိုထွန်း ခင်ဗျား ကျွန်တော့်နေရာလာ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားနေရာကို လာမယ်။” “ဟုတ် ဟုတ် အကို။” ကျွန်တော်တို့ နေရာချင်း လဲလိုက်ကြပါတယ်။
ကျွန်မ ဘေးနားကို ကိုထွန်းဆိုတဲ့လူ လာဝင်ထိုင်ပါတယ်။ သူတို့လည်း သောက်ရင်းစားရင်း အရှိန်တက်နေပြီ‌ဆိုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိလာကြပါပြီ။ ကျွန်မလည်း ဝိုင်တန်ခိုးကြောင့် သွေးကြောတွေ နွေးထွေးလာပြီး သက်တောင့်သက်သာတော့ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကိုထွန်းက ကျွန်မကို အမ အဆင်ပြေရဲ့လားတဲ့။ “အင်းးး ” လို့ပဲ စကားတစ်လုံးတည်း ပြန်ဖြေရင်း ကျွန်မ သူ့ကို ပြုံးပြလိုက်လား မပြုံးလိုက်ဘူးဆိုတာဇဝေဇဝါပါပဲရှင်။ ခဏကြာတော့ သူက ကျွန်မလက်လေးကို လာကိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မလေ မကြောက်ဘူးဆိုပေမယ့် နည်းနည်းလေးတော့ တွန့်သွားပါတယ်။ သူကတော့ ကျွန်မကိုကိုနဲ့ စကားပြောရင်း ‌သူတို့ပါလာတဲ့အရက်တွေကို ရေခဲတုံးလေးတစ်တုံးစီထည့်ရင်း အရသာခံသောက်နေကြပါတယ်။ သူ့လက်က ကျွန်မလက်ကလေးကို မလွတ်ဘဲ ဆက်ကိုင်ထားတော့ ကျွန်မလေ ရင်တွေ တစ်ဒိန်းဒိန်းနဲ့။ သူ့အောက်ကို အသာငုံ့ကြည့်တော့ ဘောင်းဘီထဲက သူ့ဟာကြီးက ဖုထွက်နေတယ်။ ကျွန်မ ရေအရမ်းငတ်တာပဲရှင်။ အာခေါင်တွေ ခြောက်လာသလိုပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ရှေ့မှာရှိတဲ့ ဝိုင်တစ်ခွက်ကိုပဲ အရသာခံအာရုံစိုက်လို့ အသာမော့လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သောက်ရင်းစားရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ကိုထွန်းက လက်ကိုင်လိုက်တော့ မိန်းမကိုယ်လုံးလေး တစ်ချက်တုန်သွားတာ သတိထားမိလိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဇာတ်လမ်းတော့ စပြီ ဆိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲလည်း သွေးတွေဆူလာတယ်။ ကာမစိတ်တွေလည်း နိုးကြွလာခဲ့တယ်ဗျာ။ အောက်က ငပဲကလည်း တင်းမာပြီး ခေါင်းထောင်ထလာပြီ။ ဆက်သောက်ရင်း စကားပြောရင်းနဲ့ ကိုထွန်းက ကျွန်တော့်မိန်းမမျက်နှာနားလေးကို တစ်ချက်တိုးကပ်သွားတယ်။ မိန်းမပါးလေးကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်တာ တွေ့ရတယ်။ မိန်းမက ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး ပါးပြင်မှာ သွေးကြောလေးတွေက ရဲကနဲပဲ။ သူ့ယောက်ျားရဲ့အရှေ့တည့်တည့်မှာ သူစိမ်းတစ်ယောက်က သူ့ကိုနမ်းလိုက်တာဆိုတော့ ရှက်သွားလို့ထင်တယ်။ ခေါင်းလေးငုံ့သွားတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲလည်း ဒိန်းတလိန်းနတ်ဝင်ပူးသလို အသံစုံမြည်ဟီးပြီး ဗလောင်ဆူကာ မိန်းမောတဲ့အရသာတစ်မျိုးကို ခံစားနေရတယ်ဗျာ။ အားအင်တွေ ယုတ်လျော့သွားတာလား ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းဖြစ်သွားတာလားတော့ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရပေမယ့် ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ကိုထွန်း နှစ်ယောက်သား ခရီးထပ်ဆက်‌နိုင်ဖို့ကို ကျွန်တော် ပိုလို့ မျှော်လင့်နေမိတယ်။ ကုန်သွားတဲ့အရက်ခွက်ကို သေသေချာချာထပ်ငှဲ့၊ ရေခဲတစ်တုံးထပ်စပ်ပြီး လက်တစ်ဖက်နဲ့ ခွက်ကိုလှုပ်ရမ်းရင်း အအေးဓါတ်ပျံ့နှံ့သွားအောင် ‌ခလှောက်လိုက်ပါတယ်။ စီးကရက်တစ်လိပ်ထုတ်၊ မီးညှိရင်း ရှိုက်ကာ မီးခိုးငွေ့တွေ ဟူးက‌နဲ မှုတ်ထုတ်ရင်း အပေါ်ကို ခေါင်းပြန်မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်မိန်းမ အေးမို့ဟာ ကိုထွန်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ပျော့ခွေနုန်းကျရင်း ကိုထွန်းရဲ့နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းစုပ်မှုတွေအောက်မှာ လူးလွန့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
တကယ့်ကို စိတ်တွေ ထကြွစရာပါပဲ။ ကိုထွန်းဟာ အေးမို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို အားမနာလျှာမကျိုး ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်မှာ နမ်းစုပ်ရင်း အေးမို့ရဲ့ခါးကိုဖက်ကာ လက်တစ်ဖက်က အေးမို့ရဲ့တင်သားလုံးလုံးလေးကို ဖျစ်ညှစ်နေပါတယ်။ အင်း ဟင်း ဟင်းးအွန်းး ဆိုတဲ့ အေးမို့ရဲ့ညည်းသံလေးတွေရယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ဆိုတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်နှုတ်ခမ်းချင်း ဆွဲစုပ်ယူနေတဲ့အသံလေးတွေကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့လိင်စိတ်တွေ တစ်ရိပ်ရိပ် အရှိန်ထိုးတက်လို့လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အေးမို့လေးဟာ တစ်ပါးသူရဲ့လက်ထဲမှာ ပျော့ခွေပြီး အရသာတွေခံစားနေပါတယ်။ စပ်ထားတဲ့ ရမ်တစ်ခွက်ကို တစ်ချက်တည်းကျွန်တော်မော့သောက်ချလိုက်ပြီး ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်အမြင်အာရုံတွေဟာ အရက်ကြောင့်လား၊ လိင်စိတ်ကြောင့်လား၊ အေးမို့ရဲ့အရသာခံညည်းညူနေတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့်လား မသိ၊ တစ်ဖြေးဖြေး ရီဝေမှုန်မှိုင်းလို့လာပါတယ်။ အေးမို့ကို ဟိုလူက နို့အုံတွေ ညှစ်နယ်ပေးနေတာ။ အေးမို့လေး လူးလွန့်ပြီး ခပ်သဲ့သဲ့ညည်းညူနေတာပါပဲဗျာ။ ကာမစိတ်တွေ တစ်ဟုန်ထိုးတက်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကို မြင်ရတဲ့အရသာဟာ တကယ့်ကို သွေးသားဆူဝေစရာကြီးပါဗျာ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ အားမရ‌လာတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဝင်ပါလာချင်စိတ်တွေ တစ်ဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုလူအရှိန်ပျက်ပြီး တန့်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ အခြေအနေကို ငြိမ်ပြီးစောင့်ရင်း ကိုယ့်စိတ်ကို မနည်းပြန်ထိန်းနေရပါတယ်။ အွန်း အ အ ရှီးးး အေးမို့ရဲ့ထဘီကို မတင်ကာ ထဘီအောက်ထဲလက်နှိုက်ပြီး ကိုထွန်းလက်က အေးမို့ရဲ့ အဖုတ်ကို နှိုက်ကလိနေတာဗျ။ အေးမို့ရဲ့ပေါင်တံစင်းစင်းလေးတွေဟာ တွန့်လိမ်လို့ ကိုထွန်းရဲ့လက်မဲကြီးက ကြားထဲဝင်ကာ တစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ အေးမို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး တစ်သိမ့်သိမ့်တုန်ပြီး သူ့လက်က ကိုထွန်းရဲ့လည်ဂုတ်ကို ပြန်သိုင်းဖက်ထားပါတယ်။
ပလွတ် ပလွတ် အင့် အား အား အွန့်ဟွန်း အင်း ပြွတ် ဟင်း ဟားးး အပေါ်မှာလည်း နှုတ်ခမ်းတွေ တေ့စုပ်ရင်း အေးမို့ရဲ့ပါးစပ်ထဲ ကိုထွန်းလျှာကြီးက ထိုးသွင်းကလော်နေတာ နေရာအနှံ့ပါပဲ။ အေးမို့ကလည်း အငမ်းမရ ကိုထွန်းရဲ့လျှာကို ပြန်ဆွဲစုပ်ရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့လျှာကို ပြန်ထိုးပေးနေပါတယ်။ အောက်ကလည်း ကိုထွန်းရဲ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်မိန်းမအေးမို့ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲကို အသားကုန်ထိုးဆွပွတ်ဆွဲ နှိုက်ကလော်ရင်း လက်မက တစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ အစိလေးကို နှိုးဆွနေသလားမသိပါဘူး။ အေးမို့ရဲ့ အောက်ခံပန်တီဘောင်းဘီလေး ပေါင်လယ်လောက်လျှောကျပြီး ပေါင်သားစင်းစင်းလေးတွေက တစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ ပန်တီမိုးပြာရောင်လေးရဲ့အလယ်မှာ အရည်ကွက်ကလေးတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူတို့ကတော့ ကျွန်တော်ရှိတယ်လို့တောင် မထင်တော့ပါဘူး။ တစ်ရှူးရှူးအသက်ရှုသံတွေ၊ တစ်ဟင်းဟင်းညည်းညူသံတွေနဲ့ တကယ့်လင်မယားတွေလို ထိုးနှိုက်ဆွနမ်းစုပ်ကြပြီး ကာမရေယာဉ်ကြောထဲ အစုန်အဆန်မျောနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့အသိစိတ်ပျောက်နေတုန်း အသာလေးလစ်ထွက်ကာ ခြံထဲဆင်း၊ ချဉ်ပေါင်ပျိုးခင်းလေးဘေးနားက မြေကွက်လပ်အလွတ်လေးမှာ ဖျာတစ်ချပ်ခင်း၊ စောင်နှစ်ထည်ခင်းကာ ကျွန်တော့်မိန်းမအလိုးခံဖို့ စစ်တလင်းကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နေရပါတယ်။ ကိုယ့်မိန်းမကို သူများလိုးဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အိပ်ယာပြင်ပေးရတာ အရသာကတစ်မျိုးကြီးပဲဗျာ။ ညချမ်းချိန်ခါ လေနုအေးက တစ်သော့သော့အပြေးနှင်လို့ လောကဓာတ်ခွင် အေးချမ်းနေပေမယ့် ဟော့ဒီ့ ကာမစစ်တလင်းခြံလေးကတော့ အပူရှိန်တွေ တစ်ရိပ်ရိပ်တက်နေပါတော့တယ်။
အိမ်ထဲကို ပြန်ဝင်လာတော့ ကျွန်တော်မရှိတော့တာ သိသွားလို့ ပိုရဲတင်းသွားကြတယ်နဲ့တူတယ်။ ကိုထွန်းဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ဆင်းပြီး နှစ်ယောက်ထိုင် ဆက်တီပေါ်မှာ မျက်စိမှိတ် ပေါင်ကားထားတဲ့ အေးမို့ရဲ့ပေါင်ခွကြားလေးထဲ သူ့မျက်နှာထိုးအပ်ရင်း အေးမို့ရဲ့အဖုတ်ကို သူ့လျှာကြီးနဲ့လျှက်ကာ အဖုတ်အခေါင်းလေးထဲ လက်နဲ့ထိုးဆွ၊ လျှာထိုးသွင်း ကလော်ထုတ်၊ တစ်ရှုးရှုးနဲ့။ အေးမို့ရဲ့စောက်ရည်လေးတွေ ရွဲလာရင်လည်း နှုတ်ခမ်းသားတွေကို တေ့စုပ်ပြီး အားရပါးရ လျှာစွမ်းပြနေပါတော့တယ်။ အေးမို့ဟာ အဲ့ဒီ့လူရဲ့ခေါင်းကို သူ့အဖုတ်ထဲ အသားကုန်ဆွဲကပ်ရင်း ခါးလေးကော့ပျံကာ တစ်အင်းအင်းတစ်အားအား အသိစိတ်လွတ်ညည်းညူးနေပါတယ်။ အအား အား ရှီး ပလွတ် ပြွတ် ဇူးးးးရှီးးး အားယားးအင်းးအွန်ဟွန်း အွန်းးး အားးး အေးမို့ရယ် အစက သင့်တော်ပါ့မလားဆိုပြီးတော့ အခုကျ နင့်အဖုတ်ကို ကိုထွန်းဆီကော့ပေးပြီး ဆွဲကပ်ထားတာ သူ့ခေါင်းတောင် နင့်စောက်ခေါင်းထဲဝင်တော့မယ် အေးမို့ရယ်။ တဏှာတွေ ထန်ပြီး အကောင်းကြီးကောင်းနေတာ။ နင့်မျက်နှာကို ကြည့်ရတာ မာန်ဖီနေတဲ့ ကျားသစ်မလေးလိုပဲ။ ခဏနေရင် နင်တကယ်အလိုးခံရတော့မှာပါ မပူပါနဲ့အေးမို့ရယ်။ ဟိုလူက နင့်ကို တကယ်လိုးမှာပါ။ အာ့အား ထွက်ကုန်တော့မယ်။
ကို ကိုထွန်း အားးး ရှီးးးကောင်းလား အမလေး။ ကောင်း ကောင်းတယ် လုပ်ပါ လျှာနဲ့ အထဲကိုမွေပေး အား အာ့အို ရှီးးး တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ကိုထွန်းက မတ်တပ်ထရပ်ပြီး ဘောင်းဘီဇစ်ဆွဲ အောက်လျှောချကာ သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ ကွယ်နေလို့ မမြင်ရပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမ အေးမို့ရဲ့ ပါးစပ်နားကိုထိုးပေးတယ်။ အေးမို့က “ဟင့်အင်း ” တဲ့။ငြင်းတယ်။ “လုပ်ပါ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ အမယောက်ျားမသိပါဘူး ခဏလေးပါ”တဲ့။ ကိုထွန်းက ပြန်ပြောတာ။ အေးမို့က ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက်အကဲခတ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ထဲမဝင်ဘဲ တံခါးအကွယ်က ချောင်းကြည့်နေတာဆိုတော့ သူမမြင်ရအောင် အုတ်နံရံနဲ့ ပြန်ကွယ်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ တစ်ဒိန်းဒိန်းနဲ့ ရင်တွေ ခုန်လိုက်တာ‌ဗျာ။ ခဏကြာတော့ ကျွန်တော်လည်း အဆင်ပြေလောက်ပြီအထင်နဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမတို့ရှိရာကို ပြန်ချောင်းကြည့်လိုက်တော့၊ ကျွန်တော့်မိန်းမအေးမို့ဗျာ၊ ဟိုလူ့လီးကို အသားကုန်ဆွဲစုပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူပါးစပ်အတွင်းထဲထိ မြွေတစ်ကောင်အစာမျိုသလိုကို ရှိုက်ပြီးဆွဲစုပ်နေတာဗျာ။ ခေါင်းကရှေ့‌တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့မျက်နှာက ဇက်ကလေးစောင်းရင်း လည်လည်ထွက်သွားတယ်။ အပြာဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသမီးတစ်ယောက်လို တကယ့်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုပ်နေတာ။ သူဒါတွေ ဘယ်လိုတတ်နေတာလဲ။ ငါလည်း တစ်ခါမှ မစုပ်ခိုင်းသေးပါဘူး။ ဟိုလူသင်ပေးလိုက်လို့လား။ ဟိုလူသင်ပေးရင်လည်း ချက်ချင်းကြီး အခုလောက် ကျွမ်းကျင်ပါ့မလား။ ဒါဆို ရွာမှာလင်ငယ်နေတာလား။ မဖြစ်နိုင်။ ရွာနီးချုပ်စပ် ဆယ့်ငါးရွာလောက်ကို ဩဇာတိက္ကမကြီးမားတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတောင့်တင်းလွန်းလှတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်သမီးကို ဘယ်သူမှ လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိတို့ရဲ။ ဒါ ဒါဆို သူကျောင်းသွားတက်တုန်းက ရည်းစားထားရင်း လုပ်တတ်လာတာပေါ့။
ငါနဲ့ယူတုန်းက အပျိုစစ်လို့ သွေးတွေထွက်တာ တော်သေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါခွင့်လွတ်ပါတယ်။ သူအပျိုရည်မပျက်ဘဲ ငါနဲ့ညားတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာ။ နောက်ဆိုရင်တော့ ငါလည်း သူ့ကို စုပ်ခိုင်းရမယ်။ အေးမို့ကလည်းလေ ဒီလောက်ထိလီးစုပ်ကျွမ်းတာ ကိုယ့်လင်ကို မပြောဘဲ ငြိမ်နေရတယ်လို့။ ကြည့်စမ်းပါဦးအခုတော့ ဟိုလူကိုထွန်းရဲ့လီးကို အငမ်းမရစုပ်နေလိုက်တာ။ လက်ကလည်း ကွင်းထုပေးရင်းနဲ့ ကာမဂုဏ် မာန်ဟုန်ထနေလိုက်တာ ရေခဲမုန့်မစားဖူးတဲ့ အပျိုမလေးတစ်ယောက် အားရပါးရစုပ်ယူလျှက်နေသလိုပဲ ဟိုလူ့လီးကို မက်မက်မောမော စုပ်ယူနေလိုက်တာ တော်တော်အားရနေတယ်ထင်တယ်။ လိုးစမ်းကွာကိုထွန်း။ အဲ့လောက် ငါးစမန်ထနေတဲ့ မိန်းမကို မင်းလိုးနိုင်သလောက် လိုးသွားစမ်း။ ငါကြည်ဖြူတယ် မနှမျောဘူး။ ပြီးမှ မင်းလိုးတာထက် ခိုက်အောင် ငါပြန်လိုးပြမယ်။ စောက်ကလေးမလေး ကြည့်စမ်းပါဦး သူများလီးကို စုပ်နေလိုက်တာ။ “ကိုထွန်းရေ ခြံထဲဆင်းမယ်ဟေ့။” “ဟုတ် ဟုတ် အကို။ လာပါပြီ။ ” ကျွန်တော်လည်း ခြံထဲကနေ လှမ်းအော်သလို အသံပြုလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကပျာကယာထွက်လာပါတယ်။ ခြံထဲဆင်းဖို့ အိမ်တံခါးဝက အထွက် ကျွန်တော်နဲ့ အေးမို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တော့ သူခေါင်းလေးငုံ့ထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘေးနားကဖြတ်အသွား ကိုယ်နံ့သင်းသင်းလေးကို ရလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ညီတော်မောင်မှာ တင်းကနဲပဲ။ သက်ပြင်းတွေ ဆက်တိုက်ချရင်း အိမ်ထဲဝင် အရက်ထပ်စပ်၊ တစ်ရှိန်ထိုးမော့ချကာ ကုလားထိုင် တစ်လုံးယူပြီး ခြံထဲကို ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ခြံထဲရောက်တော့ ကိုထွန်းဟာ ကျွန်တော့်မိန်းမအင်္ကျီကို ချွတ် ဘရာတွေ ပင့်တင်ပြီး မိန်းမရဲ့နို့အုံတွေကိုညှစ်နယ်ကာ နို့သီးခေါင်းတွေကို သူ့လျှာနဲ့သိမ်းလျှက် တစ်ပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်နေပါတယ်။ အောက်ကလည်း အေးမို့ရဲ့ ထဘီလေးကို လှန်တင်ရင်း အဖုတ်လေးကို သူ့လီးနဲ့ထောက်ထားပါတယ်။လီးကတော့ ကွန်ဒုံးစွပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အေးမို့ရဲ့အဖုတ်လေးဟာ ပြောင်ရှင်းချောမွေ့နေပြီး ကိုထွန်းရဲ့လီးကတော့ မဲနက်လို့ တုတ်တုတ်ခဲခဲနဲ့အမွေးတွေက အုံလိုက်ကျင်းလိုက်။ ကျွန်တော့်ထက်တော့ တစ်လက်မလောက် တိုမယ်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်မိန်းမ ကောင်းကောင်းအလိုးခံရဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အင်း ဟင်းဟင်းးအိုး အာ့အားးး မိန်းမရဲ့ညည်းညူသံလေးဟာ အင်မတန် နားဝင်ပီယံရှိလှပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကုလားထိုင်ချကာ ချဉ်ပေါင်ပျိုးခင်းနားက သူတို့ရဲ့ နှစ်ကိုယ်တူလိုးကြမယ့် မြင်ကွင်းကို အားရပါးရ စောင့်မျှော်ရှု့စားနေပါတော့တယ်။
အို့ အို အားးးးကျွတ် ကျွတ် ရှီးးးးအရမ်းလုပ်တာပဲ အေးမို့က ကိုထွန်းရဲ့ရင်ဘတ်ကို လက်သီးလေးဆုပ်ပြီးထုကာပြောသည်။ ဟာ ဒီလူတော့ ငါ့မိန်းမကို စလိုးပြီနဲ့တူတယ်။ အေးမို့ကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုထွန်းရဲ့ကျောကုန်းကို ဆွဲဖက်ကာ အောက်ကနေ ဟင်းဟင်း ဟင်းဟင်းနဲ့ နှာသံပေးညည်းညူရင်း ကိုထွန်းရဲ့လီးဒဏ်ကို ခံစားနေရရှာသည်။ ကိုထွန်းကလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်နှုတ် အသာလေး စီးစီးပိုင်ပိုင်ပြန်ထိုးထည့်ကာ မျက်လုံးမှေးစင်းလျက် ခေါင်းမော့လျက်သားနဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ စောက်ဖုတ်အရသာကို အဆိပ်တက်နေသလို ခံစားနေတယ်။ အေးမို့ကိုကြည့်ပြန်တော့လည်း ရှေ့သွားတွေစိကာ နှုတ်ခမ်းလေး ထော်ထားရင်း ပါးပါးလျလျ ညည်းညူးနေတယ်။ အင်း ငါ့မိန်းမတော့ ‌အလိုးခံရတာ ကောင်းနေပြီ။ ကိုထွန်းဖင်ကြီးကလည်း မဲလို့ တင်ပါးကြီးတစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ ခါးကိုညှောင့်ပြီးလိုးနေတာ ဂွေးဥကြီးနှစ်လုံးက တွဲလဲကျပြီး အေးမို့ရဲ့ ပေါင်ခွကြားကို တစ်ဖတ်ဖတ်ရိုက်ခတ်နေတယ်။ အေးမို့ရဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကိုယ်လုံးလေးကို အပေါ်ကနေ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး မဲမဲသဲသဲနဲ့ တက်လိုးနေတာဟာ တော်တော့်ကို အားမနာလျှာမကျိုးနိုင်လွန်းတယ်။ ဟော ဟော အေးမို့ရဲ့ နို့တွေကို ဆွဲစို့ပြန်ပြီ။ နို့သီးခေါင်းတွေကို လျှာနဲ့ထိုးပြီး ရှေ့သွားနဲ့ကိုက်နေတာ ငါလိုးတဲ့မှပဲ။ ငါတောင် ပြေးစို့ချင်လာပြီ။ နယ်နေပြီ။ နယ်နေပြီဟ ငါ့မိန်းမရဲ့ နို့အုံဖွေးဖွေးလေးကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးနဲ့ ဖိပြီးနယ်ဖတ်နေတာကွာ အေးမို့ကော့လူးနေတာပဲ ခေါင်းလေးတောင် ဘယ်ညာရမ်းလို့။ တောက်! ညဘက်လရောင်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် နေ့ဘက်လို သိပ်ပြီး‌လင်းလင်းချင်းချင်း မမြင်ရတာ နာတယ်ကွာ။
အား ရှီးရှီးးး ဖောက် ဖောက် ဖတ် အင့် အင့် ကှိုကလြားးး အင်းးအာ ဘာတွေပြောနေတာလဲ လုပ်မှာဖြင့် မလုပ်ဘူးးအို နည်းနည်း ထပ်မြန်ပြီနော် ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်းးအင်းးအားးအဟာ့အာ ရှီးးး ကောင်းလားးး အမလေးးး အားးကောင်းတယ် ဆောင့် အင့် အင့် အောက်ကပြန်ကော့ပေးလေ အဲ့ဒါမှ အပေါ်ကလိုးတဲ့လူ အားရမှာ အင်း ဟုတ်တယ် အဲ့လိုကော့ ရော့ အင့် အားးး အအားးအာ အို့ အင်း ဟင်း ဟင်းးး ပြီးတော့မလားး မပြီးနဲ့ဦးနော် လိုးလို့ကောင်းနေတုန်းးမင်းစောက်ပတ်က စီးပိုင်ပြီး လိုးလို့ကောင်းတယ်ဟာ မပြီးနဲ့ဦးလေ ဟာ ကွာ ဒီလောက်ဖြစ်တာ ရော့ကွာ ရော့ကွာ ဖောင်း ဖြောင်း ဗြောင်းးရော့ အင့် အားးးးကျွတ် ကျွတ် အမလေးးး အားးအွန်း အွန်း အွန်း အွန်း အင့် အားးး ကျွန်တော့်မိန်းမပြီးသွားပြီနဲ့တူတယ် ဟိုလူက လိုးလို့ကောင်းနေတုန်း။ အေးမို့ကတော့ ကော့ပျံနေတာပဲ။ ကိုထွန်းရဲ့အလိုကျ အောက်ကနေ ပြန်ကော့ပေးတာကို ဟိုလူကလည်း မာန်တွေတက်ပြီး အေးမို့တစ်ချီပြီးသွားတာတောင် ဆက်တိုက် လိုးနေတာ တစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့။ ငါ့မိန်းမ စက်ဖုတ်တော့ ဆုံထဲထည့်ထောင်းခံနေရသလိုပဲကွာ။ လီးထဲမှပဲ။ တစ်အားအားနဲ့ အကောင်းကြီးကောင်းပြီး လီးဒဏ်ခံနေရတာ။ အသိစိတ်လွတ်ပြီး လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်တယ်နဲ့တူပါတယ်၊ ကိုထွန်းကျောကုန်းကို လက်သည်းတွေနဲ့ ဆွဲကုပ်ထားတာ အစင်းရာကြီးတွေ ထင်းနေတာပဲ သွေးတွေတောင် စို့လို့။ ဟိုလူက အသား‌နာလေ မာန်တွေတင်းပြီး အသားကုန်စွတ်လိုးမှာကို ငါ့မိန်းမ မသိဘူးလား။
အား အား အားးအိုး ဖြောင်း ဗြောင်း အင့် အား ဖတ်ဖတ် ဖတ်ဖတ် ဖောက် ဗြောင်း အင့် အား အရှိန်တက်လာပြီ ‌ပြီးတော့မယ်။ အောက်က ကြိတ်ခံတော့ ရော့ အင့် အားးဆောင့် ဆောင့် အမလေးလေး ဆောင့် အား အား ဟိုလူက မိန်းမရဲ့လည်ဂုတ်ကို သိုင်းဖက်ပြီး တရစပ်ကို ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆောင့်တော့တာ အေးမို့တော့ မရှု့မလှပဲ။ ပထမအချီနဲ့တင် မျက်ဖြူလန်နေပြီ။ အချက် ခြောက်ဆယ်ကျော်လောက်လဲ ထပ်ဆောင့်ချအပြီး ကိုထွန်းတစ်ယောက် တွန့်လိမ့်ပြီး ပြီးသွားတယ်ဗျာ။ အောက်က ‌ကျွန်တော့်မိန်းမ အေးမို့ကတော့ တစ်ဇတ်ဇတ်တုန်ယင်နေတာ။ ဟိုလူက ပြန်ဆွဲနှုတ်ပြီး ကွန်ဒုံးကို ချွတ်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ပေါင်ပြန်ဖြဲပြီး စောက်ပတ်ကို မျက်နှာအပ်၊ တစ်ပျက်ပျက်နဲ့ လျှာကိုပင့်ကော်ထိုးလျှက်တော့တာပဲဗျာ။ အမလေး လေ။ အားးအအားးရှီးးး ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ် အာဟာအာ ရှီးးး မိန်းမခမျာ အောက်ကခင်းထားတဲ့ စောင်တွေကို လက်နဲ့ကုပ်ဆွဲ တွန့်လိမ်ပြီး ညည်းညူနေတာ။ တော်တော့်ကို ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲဗျာ။
ကျွန်တော့်မိန်းမက သိပ်ကို လိုးချင်စရာကောင်းတာပါပဲလား။ ဟိုလူက အေးမို့ရဲ့ စောက်ပတ်က အရည်တွေကို အကုန်ပြောင်စင်အောင်လျှက်ပြီးမှ အေးမို့ပါးစပ်ပေါ် တက်ခွပြီး နှုတ်ခမ်းကို လီးနဲ့ထိုးတယ်။ အေးမို့က သူ့ဒစ်ကို လျှာနဲ့ဝိုက်ပြီး လျှက်ပေးနေတယ်‌ဗျာ။ ကြည့်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။ အေးမို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးထဲကို အဖုတ်ကို လိုးသလို သူ့လီးတုတ်တုတ်ခဲခဲနဲ့ လိုးနေတယ်ဗျာ။ ကဲ ကြည့်တော့။ အဲ့ဒါပဲ။ မိန်းမဆိုတာ။ လ‌ရည်ဝင်ရင် အသေခင်တယ်တဲ့။ အမှန်ပဲ။ အခုပဲ ကြည့်လေ။ သူ့အဖုတ်ကို လိုးတာမှ မဟုတ်တာ။ သူ့ပါးစပ်ကို ဟိုလူက တက်လိုးနေတာလေ။ သူ့ရဲ့ထမင်းစားတဲ့ ပါးစပ်ကို လီးနဲ့တက်လိုးနေတာဗျ။ ပါးစပ်ထဲမှာ မဆန့်မပြဲ။ ဟိုမိန်းမကလည်း လက်ဖျားလေးနဲ့သာ ကိုထွန်းပေါင်ကို အသာလေး ဟန်ဆောင်တွန်းထားတာ။ ဟိုလူ့လီးကို သူကြိုက်နေတာ အသိသာကြီး။ တစ်အွတ်အွတ်နဲ့ မျက်ရည်တွေဝဲပြီး ပျို့တက်လာတာတောင် ဆက်အလိုးခံနေတာ။ တော်တော် နှာထန်တဲ့ မိန်းမဗျာ။ အစကတော့ ရိုးသလိုလို အေးသလိုလိုနဲ့။ အခုကျ အလိုးလည်း ခံရရော စောက်ပတ်တင်မဟုတ် ပါးစပ်နဲ့ပါ အလိုးခံတာ။ တစ်ချက်နှစ်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဟိုလူက သူ့ပါးစပ်ကို လီးနဲ့လိုးတာ ဆယ်မိနစ်ကျော်နေပြီ။ အဲ့ဒါကိုတောင် မက်မက်မောမောနဲ့ အောက်ကနေ နှုတ်ခမ်းစုပြီး ထပ်အလိုးခံနေတုန်း။ ဟိုလူက အသာလေး ဆွဲချွတ်တာတောင် အချွတ်မခံပဲ ခေါင်းကြွပြီး လိုက်ဆွဲစုပ်နေတာ။ ဖေလိုးမ။ စောက်ပတ်တင်မဟုတ်ဘူး စောက်ပါးစပ်ပါ ယားတဲ့ဟာမ။ သူစိမ်းလိုးတာတောင် သူ့လင်ရှေ့မှာ အလိုးခံတယ်။ ငါလိုးထဲမှပဲ ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ လီးပဲ။ မင်းမေစက်ပတ်။ လိုးကွာ လိုး။ အေး ဟုတ်တယ် သူ့ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး လိုးး။ အေး ဟုတ်တယ် ငါဖြစ်စေချင်တာ အဲ့လို ကိုင်ထား ခေါင်းကို ကိုင်ထား။ မလွတ်နဲ့ လိုးးး ဆောင့်လိုးချ ဆောင့်လိုးချ။ ဟာကွာ ဆောင့်လိုးချပါဆို။ ဟေ့လူ တစ်ဆုံးထိ လိုးထည့်လိုက်လေ။ အဲ့လောက် အလိုးခံချင်နေတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်။ လီးကြိုက်တဲ့ ကောင်မကို နောက်စေ့က ထုပ်ချင်းပေါက် ပွဲချင်းပြီးသေသွားအောင် ဆောင့်လိုးချ။ အင်း ဟုတ်တယ် လိုးစမ်း ကျုပ်မိန်းမ ငထန်မကို လိုးး။ ဟိုမသာမက တစ်အွတ်အွတ် တစ်အင်းအင်းနဲ့ ကြည့်စမ်း အနိုင်မခံအရှူံးမပေး မာန်တင်းပြီး အသေလွေးတာ။ တောက်!! ဟိုလူက စောက်သုံးမကျလိုက်တာ။ ဟေ့လူ လိုးဗျ။ အေး ဟုတ်တယ် ကောင်းတယ် အဲ့လိုဆောင့်ထိုး။ ကောင်မ။ မျက်နှာကို မဲ့ရွဲ့သွားတာပဲ။ ဟိုကောင်က လီးနဲ့ဆောင့်ထိုးလိုက်တာ။ ဆီးခုံနဲ့ သူ့မျက်နှာနဲ့ ရိုက်တာတောင် ဖောင်းကနဲပဲ။ အခုမှ ပါးစပ်ထဲက လီးပြန်ချွတ်ပြီး တစ်အွတ်အွတ်နဲ့ ပြန်ပျို့တက်ပြီး ထထိုင် အန်ချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ ဖေလိုးမ နောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့ မှတ်သွားပြီ။ ကိုထွန်းရေ ခင်ဗျား တော်‌တယ်ဗျို့။ ကြာတော့ ကျုပ် အားမရတော့ဘူးဗျာ။ ပါးစပ်က “ဟေ့လူ ကိုထွန်း” “ဗျာ ” “ဒေါ့ဂီဆွဲဗျာ မရပ်နဲ့။ ” “ဟုတ် ဟုတ် လုပ်ပြီ။ ဖြစ်စေရမယ်” ဟိုလူက ကျုပ်ကို ပြန်ပြောရင်း ‌ကွိုင်တစ်ခုထပ်ဖောက်ပြီး သူ့လီးမှာ ထပ်စွပ်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ အေးမို့ကို ဖင်ဆွဲထောင်ပြီး ခါးကို လက်နဲ့ အသာဖိချတယ်။ အေးမို့က ဒူးထောက်ပြီး ကုန်းကုန်းလေး။
ဟိုလူက အနောက်ကနေ တစ်ချက်တေ့သွင်းပြီး ဆက်တိုက်လိုးတော့တာပဲ။ ဖြန် ဖြန်း ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဖြောင်း အင့် အင့် အွန့် အာ အာ့ အာ့ အာ အအားးးးဖောင် ဖြောင့် အင့် အား ကြည့်စမ်းဗျာ။ ဟိုလူက အနောက်ကနေ ဆက်တိုက်လိုးတာ။ အရှိန်ရနေပြီ။ အေးမို့ရဲ့ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို လက်နဲ့ဆွဲပြီး အသေလိုးနေတာ။ ဆက်တိုက် တရစပ်။ အေးမို့ဖင်လေးကလည်း ဟိုလူ့ဆီးခုံနဲ့ရိုက်ခတ်တိုင်း လှိုင်းတွန့်လေးတွေထသွားတာ ဖင်ဖွေးဖွေးလေး ကြည့်လို့ သိပ်ကောင်းတာပဲဗျာ။ ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း အား အား ရှီးးအင့် အွန့် အွန့် အွန့် အွန့် အား အား ဖောင်း ဖြောင်း အင့် အားးး လိုးနေတာဗျာ။ ဖာသည်မတစ်ယောက်ကို ကြေးကြီးပေးထားရလို့ တန်အောင် လိုးနေသလိုပဲ။ လိုးစမ်း။ ခင်ဗျား လိုးနိုင်သလောက် လိုးစမ်း။ ကျုပ်မိန်းမ အကောင်းကြီးကောင်းနေပြီ။ ခင်ဗျား လီးကို ကြိုက်နေပြီဗျ။ ခင်ဗျား လိုးတာကို ကြိုက်နှစ်သက်နေပြီ။ ဆောင့်စမ်းဗျာ စက်ပတ်ကို အသားနီလန်အောင် သာ လိုးပေရော့ ကိုယ့်လူရေ။ ဖောင်း ဖြောင်း ဖန်းဖန်း အင့် အား အင်ဟင့် အားးး ဟိုလူလိုးနေတာ မိနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်နေပြီ။ နှစ်ယောက်လုံးလည်း ချွေးတွေ ရွဲနစ်နေတာ။ ဟိုမိန်းမ မပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးရဲ့သားနဲ့ ဆက်ပြီး အလိုးခံနေတာနေမှာ။ တော်တော် ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့မိန်းမ။ ဖောင်း အင့် ဖြောင်း အားးအိုး လိုး ဆောင့် ဆောင့် ဆောင့် အင်းးး ပာ အားးး နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ နှစ်ယောက်လုံး တစ်ဇတ်ဇတ်တုန်ပြီး ဝမ်းလျားမှောက် ထပ်လျက်လဲကျသွားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ နှစ်ယောက်သား မောဟိုက်ပြီး စကားတောင် မပြောနိုင်ပါဘူး။ ခဏကြာတော့ နှစ်ယောက်သား ဖုတ်ဖက်ခါပြီး ထလာတယ်။ ကျွန်တော့်နားရောက်တော့ အေးမို့က ခေါင်းငုံ့ထားတယ်။
ကျွန်တော်က “ကဲ ကိစ္စပြီးရင် ခဏနား။ အမောလေးဘာလေး ဖြေပြီး ဆက်သောက်ကြတာပေါ့ဗျာ။ “ဆိုတော့ “ဒါပေါ့ အကိုရာ” တဲ့။ ကိုထွန်းက ပြန်ပြောတာ။ သူလည်း တော်တော် အားရသွားတော့ ကျေနပ်နေတဲ့ပုံ။ ကျွန်တော့်တို့လည်း ဒီလိုနဲ့ အရက်ဝိုင်း ထပ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ခုနက သောက်ထားတဲ့ အရှိန်တွေလည်း သူတို့လိုးပွဲကို ကြည့်ရင်း အကုန်ချွေးစေးတွေနဲ့အတူ ပျောက်ကုန်ပြီ။ ကဲ လာ အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်ကြမယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမကတော့ ပေါင်လေးနည်းနည်း ကွနေသလိုပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့ကိုထွန်းနဲ့ အရက်ဝိုင်းမှာပြန်ထိုင်တော့ ကိုထွန်းက နည်းနည်းကြမ်းသွားလား အကို တဲ့။ ကျွန်တော်က ခင်ဗျား ထပ်ကြမ်းလို့ ရသေးလား ဆိုတော့ ဒီလူက ဟင်ကနဲ တစ်ချက် ကြောင်သွားတယ်။ပြီးမှ နှစ်ယောက်သား ထရယ်ကြတာ တစ်ဟားဟားနဲ့။ ဟူး ရင်ထဲပေါ့သွားတာပဲဗျာ။ ကြည့်ချင်တာ ကြည့်လိုက်ရတော့ ကျေနပ်မိပါတယ်။
အေးမို့လေ ကိစ္စပြီးလို့ ဝိုင်းမှာ ပြန်ထိုင်တော့ ကိုကို့ကို ရှက်လိုက်တာဆိုတာ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ ကိုကိုက အေးမို့ရှက်နေတာ သိလို့နဲ့တူတယ်။ သူ့အနားခေါ်ထားပြီး အေးမို့ရဲ့ ခါးလေးကို ပွေ့ဖက်ထားတာ နွေးထွေးလှပါတယ်။ အေးမို့လေ ခုနက ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အားအင်တွေဟာ ကိုကို့ရဲ့ ကိုယ်ငွေ့လေးတွေကြောင့် အားပြန်ပြည့်ဖြိုးလာသလို ခံစားရမိပါတယ်။ အေးမို့လည်း ကိုကို့ပါးကို ရွတ်ကနဲ နမ်းလိုက်တော့ ကိုကိုက အေးမို့နှာဖူးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းပြီး ဆံပင်လေးတွေ သပ်တင်ကာ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ပြန်လည် ဆွဲသွင်းထားပါတယ်။ အေးမို့ရဲ့ဘဝလေး ပြန်လည် လုံခြုံသွားသလို ခံစားမိသလို ခုနက အသိစိတ်လွတ်သွားတဲ့ အဖြစ်သနစ်တွေကြောင့် အေးမို့လေ ကိုကို့အပေါ် အားတုံ့အားနာလည်း ဖြစ်မိသလို နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းကြီးမားတဲ့ ကိုကို့ကို ပို၍ပို၍ မြတ်နိုးတွယ်တာမိရပါတယ်ရှင်။ အေးမို့လေ ပေါင်တွေနာကျင်ပြီး ပိပိလေးလည်း ကျိန်းနေပါပြီ။
ရင်ဘတ်က အေးမို့ရဲ့ နုနုနယ်နယ် နို့အုံလေးလည်း နီရဲပြီး လက်ယောင်လိုက်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီ့လူကြီးပေါ့။ ကိုကိုနဲ့ပါလာတဲ့လူကြီးလေ။ ဟွန်း သူများမယားကို အားမနာလျှာမကျိုး လိုးတာ လိုးတာဆိုတာ အားနဲ့မာန်နဲ့ ပစ်ပစ်ဆောင့်တာ။ အေးမို့ရင်ထဲ နင့်ကနဲပဲ။ ပြီးတော့ သူ့ဟာကြီးက ကိုကို့လောက်လည်း မရှည်ပဲနဲ့ ခြောက်လက်မ မပြည့်တပြည့် တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး။ အေးမို့ရဲ့အဖုတ်လေးထဲ တင်းနေတာ။ အေးမို့ ပြန်ညှစ်လို့တောင်မရဘူး။ တော်သေးတာပေါ့ အေးမို့ရဲ့ ကိုကိုက အရင်တုန်းက လိုးပေးနေစ ရှိနေလို့ အေးမို့အဖုတ်မကွဲတာ။ တကယ်ပဲ။သူလိုးတာက လူကို မျော့နေတာပဲ။ အေးမို့မှာ ဘယ်နှချီ ဘယ်နှခါ ပြီးမှန်းတောင် မသိဘူး။ ပထမတစ်ခါ သူအပေါ်ကနေ တက်လိုးတုန်းက အေးမို့ နှစ်ခါ တိတိပြီးတယ်။ နောက် သူ အေးမို့ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး အနောက်က ဆောင့်လိုးတာ။ အေးမို့လည်း မျက်လုံးတွေ ဝေဝါးပြီး အသိစိတ်လွတ်သွားတာနဲ့ ဘယ်နှစ်ခါပြီးမှန်းကို မသိတော့တာ။အာကာသဟင်းလင်းပြင် လေဟာနယ်ထဲ လွင့်မျောနေသလိုကြီး။ အေးမို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ် သူ့ကိုယ်လုံးကြီး အိကျလာပြီး တက်ဖိထားမှ အေးမို့အသိစိတ်ပြန်ဝင်လာတာ။ ကောင်းတာလည်း ဆိမ့်နေတာပဲ။ ကိုကိုလိုးတာနဲ့ သူလိုးတာနဲ့ မတူဘူး။ ဒါပေမယ့် သူလိုးတာလည်း ကောင်းသလို ဟိုးတုန်းက အေးမို့ကို ကိုကိုလိုးတုန်းကလည်း ကောင်းတာပဲ။ ကိုကိုလိုးတာက ချိုအီအေးချမ်းသလိုခံစားရတယ်။ အဲ့ဒီ့လူ လိုးတာက‌ကျတော့ အရိုင်းဆန်တယ်။
သမန်းဝံပုလွေတစ်ကောင်လိုပဲ။ အေးမို့ကို မညှာမတာ တက်လိုးပစ်တာ။ အေးမို့အသိစိတ်ပျောက်အောင်ကို လိုးပစ်တာ။ အဲ့ဒါကိုတောင် ကိုကိုက ဘေးနားကနေ ကြည့်နေနိုင်တယ်နော်။ ကိုကို့ရှေ့မှာ လိုးရတာ တမျိုးကြီးပဲ။ လိင်စိတ်ပိုကြွသလိုမျိုး ခံစားရတာ ဒူးတွေပါ မခိုင်ချင်တော့ဘူး။ အခုတော့ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲ မှိန်းနေရတာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ စကားပြောသံတွေကို ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်ပဲ။ အေးမို့ အမောလည်းပြေရော ကိုကိုက သူသောက်နေတဲ့ အရက်ခွက်ကို အေးမို့ကို လာတိုက်တယ်။ တစ်ခါတည်း မော့သောက်လိုက်တဲ့။ အေးမို့လည်း ကိုကိုပေးတဲ့ခွက်ကို ယူပြီး ဂလု ဂလုနဲ့ ဆက်တိုက်ကို မော့သောက်ပစ်လိုက်တယ်။ အရသာက တစ်မျိုးကြီးပဲ။ သွေးဆူသွားအောင် နောက်တစ်ခွက် ထပ်မော့တဲ့။ ကိုကိုက လှမ်းပေးပြန်တယ်။ အေးမို့က ယူပြီး သောက်တော့မယ်လုပ်မှ ခဏလေးဆိုပြီး အေးမို့ရဲ့ဖန်ခွက်ထဲ အမှုန့် ပန်းရောင်လေးတွေ ဖြူးချပေးတယ်။အနံ့ကတော့ သင်းသင်းလေး။ မွေးနေတာပဲ။ အေးမို့လည်း ခွက်ကို တစ်ရှိန်ထိုး မော့သောက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးမှ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲ ပြန်မှိန်းနေမိတယ်။ ကိုကိုတို့ကတော့ စကားတစ်ပြောပြောနဲ့ ဟိုလူက ကျွန်မကို လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း၊ အသားလေးတွေက အိစက်နူးညံ့နေကြောင်း၊ အေးမို့ရဲ့အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေက သိပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ သူစိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ အသားကုန်လျှက်မိကြောင်း၊ အေးမို့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို သူဘယ်လောက်နှစ်ခြိုက်ကြောင်း ကိုကို့ကို ပြောပြနေပါတယ်။ ကိုကိုကလည်း သူ့ကိုအားနာဖို့မလိုကြောင်း၊ ကြုံ တုန်း အားရအောင် တစ်ဝလိုးသွားသင့်ကြောင်း၊ အေးမို့သာ အလိုးခံရင် ညလုံးပေါက် မိုးလင်းတဲ့အထိ တရစပ်လိုးနိုင်ကြောင်း၊ သူလည်း ဘေးနားက ကြည့်ရတာ အင်မတန်ကြည့်ကောင်းပြီး အေးမို့ကို ချက်ချင်းထလိုးပစ်ချင်ကြောင်း၊ အေးမို့ လီးနှစ်ချောင်းနဲ့သာ အလိုးခံရရင် အင်မတန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိကြောင်း၊ သူသာ ရတုံးရခိုက် တစ်သက်စွဲသွားအောင် အေးမို့ကို လိုးပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် ပြောဆိုနေကြတာ အေးမို့လေ ရင်ထဲကို ဗလောင်ဆူပြီး စိတ်တွေ ကြွလာသလိုလို မြူးလာသလိုလိုနဲ့ ခေါင်းထဲလည်း ရီဝေပြီး အားအင်တွေ ထကြွ သောင်းကျန်းလာပါတော့တယ်။
သူတို့ပြောတာကို နားထောင်ရင်း ကြာတော့ အေးမို့ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ အေးမို့ရဲ့ အဖုတ်လေးလည်း ကျိန်းပြီး ယားယံလာတာ အရည်တွေလည်းရွဲနေလို့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို လိမ်ထားရတာ။အားးမရတော့ဘူး အေးမို့ ပေါက်ကွဲထွက်ချင်နေပြီ။ “ရှင်တို့ ဒီတစ်ညလုံး စကားတွေ‌ပဲ ထိုင်ပြောနေမှာလား။” “အမ် ” “အွန်၊ အေးမို့ ဘာ ဘာလို့လဲ။” “ဒီမှာ ဟိုလူ ရှင့်နာမည် ဘယ်သူ။” “ကို ကိုထွန်းပါ မမလေး။ ” “ဟုတ်ပြီ ကိုထွန်း ရှင်ဒီကိုလာတာ ဘာကိစ္စလဲ” “မမလေးနဲ့ ဟိုဟို” “လိုးဖို့မဟုတ်လား။ သူများမိန်းမရဲ့ စောက်ပတ်ကို နင်အငမ်းမရလိုးချင်လွန်းလို့ ငန့်ငန့်တက် တဏှာစိတ်ကြွပြီး စစ်ကိုင်းကနေ ဒီမှော်ဘီ အထိတောင် လာလိုးတာမဟုတ်လား။ ” “ဟို ဟိုလေ” “ဘာ ဟိုလေ လဲ။ ဒီမှာ ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်း ကိုယ့်မိန်းမကိုယ်နိုင်အောင်မလိုးဘဲ သူများကို တကူးတကခေါ်ပြီး လိုးခိုင်းရတယ်လို့။ စောက်ဖြစ်ကိုမရှိဘူး။ လီးကရှည်သလောက် စောက်သုံးတစ်စက်မှ မကျဘူး။ ဒီမှာ ဟိုလူ။ ရှင်ဘာလုပ်မှာလဲ။ ရှင်ပြန်မှာလား မပြန်ဘူးလား။” “ဗျာ။” “မ‌ဗျာနဲ့။ ရှင်မပြန်ရင် ရှင့်လီးကျိုးအောင် ကျွန်မဒီည လိုးပစ်မယ်။ လာခဲ့စမ်း။ ဖေလိုးမသားကြီး။ ငါစက်ပက်ကို လာလိုးတဲ့လူကြီး။ လာခဲ့စမ်း။” ကျွန်မလည်း ပြောပြောဆိုဆို အော်ဟစ်သောင်းကျန်းရင်း အဲ့ဒီ့လူဆီသွားကာ အရက်သောက်နေတဲ့ သူ့ကို တွန်းလှဲပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ပက်လက်လန်သွားတဲ့ သူ့မျက်နှာပေါ် ထဘီကိုလှန်ပြီး တက်ဖိထိုင်ပစ်မိတယ်။ ပြီးတာနဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီတောင် ချွတ်မနေတော့ဘဲ သူ့သောက်ခွက်ကို ကျွန်မစောက်ပတ်နဲ့တက်ထိုင်ပြီး ပွတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ သူ့နှာခေါင်းနဲ့ ကျွန်မရဲ့အစိနဲ့ဖိကြိတ်ပွတ်ချေမိတယ်။ ရင်ထဲ နည်းနည်းပေါ့ထွက်သွားသလို ခံစားရမိတယ်။ တစ်ခါတလေ သူ့သွားတွေနဲ့ ကျွန်မ စောက်ပတ်နဲ့တောင် ခုတ်မိတယ်။ ကျွန်မလေ ခါးကို နှဲ့နှဲ့ပြီး တက်ပွတ်ပစ်တာ။ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်။
ရှီးးး အဲ့လူကတော့ အောက်ကနေ မွန်းလို့နဲ့တူတယ်၊ တအင်းအင်း တစ်အူးအူးညည်းညူရင်း အတင်းကိုရုန်းကန်နေတာ။ သူ့ခေါင်းကို စုံကိုင်ပြီးတော့ ကျွန်မ တက်ပွတ်ပစ်တာ။ သူများမိန်းမကို လိုးတဲ့လူစားမျိုးက အဲ့လို စောက်ခွက်ကို စောက်ပတ်နဲ့တက်ပွတ်ပစ်မှ တော်ကာကျတာ။ ကိုကိုကတော့ “ကိုထွန်းရေ။ ငါ့မိန်းမတော့ ဆေးကြွနေပြီ။ မင်းထိန်းပြီး နိုင်အောင် ကိုင်တော့ဟေ့” တဲ့ ။ သူလှမ်းပြောတာ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မကတော့ အကောင်းကြီးကောင်းနေပြီရှင်။ ………… အေးမို့အရက်ခွက်ထဲမှာ ကျွန်တော် ဆေးစပ်ပေးလိုက်တာက ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ထိ သွေးကြွမယ်မှန်း ကျွန်တ်ာမသိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ဆေးခပ်လိုက်တာ တော်တော်ကြီး လက်လွန်သွားတယ်။ သူရုတ်တရက်ကြီး ထသောင်းကျန်းတော့ ကျွန်တော်လည်း ကြောင်သွားတာ အမှန်ပဲဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း တစ်ခါမှ လေသံခပ်မာမာနဲ့တောင် မပြောခဲဖူးတဲ့မိန်းမက အခုလိုရစရာမရှိအောင်ပြောတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လန့်သွားတာ။ ကျွန်တော်တောင် ဒီလောက်ဖြစ်နေရင် ဟိုလူ့လိုမျိုး ဘေးသူစိမ်းနေရာက တွေးသာကြည့်တော့ဗျာ။ ဘယ်လောက်ထိ ကြောင်စီစီနိုင်မလဲဆိုတာ။ ဒေါသထွက်ရင်တောင် ကျွန်တော့်ရှေ့မို့ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ဘာမှလုပ်လို့်ရဘူးလေ။ အေးမို့ရဲ့ပေါင်ခွကြားထဲမှာ ‌ပေါင်နှစ်ချောင်းနဲ့ရော လက်တွေနဲ့ပါ မျက်နှာကိုအညှပ်ခံထားရပြီး အပေါ်ကလည်း ထဘီက အုပ်နေတော့ မွန်းတာပေါ့ဗျာ။ တစ်အူးအူးနဲ့ အသက်ရှုမဝဖြစ်နေတာ တော်သေး‌တယ် အေးမို့ခါးက အငြိမ်မနေဘဲ မျက်နှာကို နှဲ့ပွတ်ပေးနေလို့ တစ်ချက်တစ်ချက် အသက်ခိုးရှူလို့ရနေတာ။ ကျွန်တော်‌တို့ သောက်နေတဲ့ အရက်ဝိုင်းလည်း ရုတ်တရက်ကြီးဆိုသလို တစ်မဟုတ်ချင်း ကာမဝိုင်းအသွင် ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ အေးမို့ဟာ ဆယ်မိနစ်လောက် သူအားရအောင် ပွတ်ပြီး ကိုထွန်းရဲ့ ဘောင်းဘီကို ချက်ချင်းဆွဲချွတ်ကာ ကိုထွန်းရဲ့လီးကို ကျွန်တော့်ရှေ့မှာပဲ အားမနာလျှာမကျိုး ရဲရဲတင်းတင်း မာန်ဖီပြီး သတ္တဝါရိုင်းတစ်ကောင်လို ဆွဲစုပ်ပစ်ပါတော့တယ်။ ဟိုလူ့မျက်နှာ တစ်အံ့တစ်ဩနဲ့ မျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီး သူပေးဆပ်ခဲ့သမျှကို ပြန်ဇိမ်ယူနေတာဗျာ မျက်နှာကို ရှုံ့တွနေတာပဲ။
ရှီးးး စီး စီးးးးအားပါးပါးးးပြင်းတယ် ဟ ဖြည်း ဖြည်းးးးး ရှီးးပလွတ် ပြွတ် အ ရှီးးမမလေး အ ဖြည်းဖြည်းးသွားနဲ့ ထိကုန်ပြီ အာ မကိုက်နဲ့လေးးအာ့းးရှီး။ ပြွတ် စုပ် စုပ် မမလေး အားရအောင်သာစုပ် စုပ် ကျွန်တော့်လီးကို ကြိုက်လားးး စုပ် စုပ် ရှီးးး “နင်ဘာစကားပြောတာလဲ။ ” ဝုန်းကနဲဆို အေးမို့က မတ်တပ် ထရပ်တယ်။ သူဒေါသထွက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်။ ဟိုလူလည်း ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားတာလေ။ လိင်စိတ်ကြွအောင် ပြောကာမှ သောက်ပြဿနာထတက်မယ့်အဖြစ်။ မရတော့ဘူး။ ဒီအခြေအနေကိုထိန်းဖို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါမှ ဖြစ်မယ်ဗျာ။ အရှေ့က ကိုထွန်းကို မတ်တပ်ရပ်ကာ ဒေါသတကြီး ရန်တွေ့နေတဲ့ အေးမို့ကို အနောက်ကနေ လက်တွေဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။ ပါးစပ်ကလည်း “ကိုထွန်း၊ မလျှော့နဲ့။ ဒီမိန်းမ ထန်နေပြီ။ မင်းကွိုင်စွပ်တော့။ လုပ်တော့ မြန်မြန်။ ” ကျွန်တော်ပြောတာကို ကိုထွန်း သဘောပေါက်ပါတယ်။ ချက်ချင်း ကွိုင်တစ်ထုပ် ဖောက်စွပ်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ အေးမို့ပေါင်ခွကြားထဲကို ဝင်ပြီး အောက်ကနေ သူ့ဒစ်နဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီး ပင့်ဆောင့်တော့တာပဲ။ အေးမို့ကို လက်နောက်ပြန် မတ်တပ်ရပ်ချုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တောင် ဟန်ချက်ပျက်သွားတယ်။ အေးမို့အဖုတ်ထဲ လီးဝင်တာ ‌ဗြွတ် ဆိုရင် အေးမို့ပါးစပ်က အား ကနဲပဲ။ ကျွန်တော်လည်း အေးမို့ရဲ့လက်တွေကို ဂုတ်ပိုးပေါ်ဘယ်ညာယှက်ပြီး ချုပ်ထားလိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက အေးမို့ရဲ့ခါး‌နှစ်ဖက်ကို စုံကိုင်ပြီး ပင့်ဆောင့်တာ ဇောင့် ဇောင့် ဇောင့်ကနဲပဲ။ တော်တော့်ကို ကြည့်လို့ကောင်းတာပါဗျာ။ က်ုယ့်မိန်းမကို သူများလိုးဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ချုပ်ပေးထားပြီး ပေးလိုးရတဲ့အဖြစ်ရဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး။ “ကိုထွန်း မရပ်နဲ့ အဲ့ဒီ့အတိုင်းသာ ဆက်တိုက်လုပ်တော့။” ဇောင့် ဖောက် ဖန်း ဖောင်းး အား ရှီး အအား အိုး ဆောင့် ဆောင့်စမ်း ဖောင်း အင့် ဖန်း ဖန်း ဗြောင်းးအားးခွေးသားနင့်အာူ ဒါ အကုန်ပဲလား။ နင့်လီးက အဲ့လောက်ပဲ သုံးရတာလား ဟတ်လား ဖန်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဗြောင်းးဗြောင်း ‌ဗြောင်းးးအား ဆောင့် လိုးလေ ဖေလိုး အားးး ဖေလိုးမသားရဲ့လိုးစမ်း အားးး အေးမို့ဗျာ။ ဒီလောက်ထိ လက်ကိုအနောက်ကချုပ်ထားခံရပြီး အရှေ့ကနေ ဆွဲလိုးခံနေရတာတောင် လေသံတစ်သံတောင် မလျှော့ဘူး။ အသာကုန်ကို ပြန်အော်ဟစ်ပြီး ထပ်လိုးဆောင့်ခိုင်းနေတာ။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ဒီလောက်ထိ အလိုးခံနေရတာတောင် သူက ပမာမခန့်နဲ့ ပြန်စိန်ခေါ်နေတာ။ ကျွန်တော့်မှာ အနောက်ကနေ မနည်းထိန်းချုပ်ထားရင်း ကိုထွန်း ပုံမှန်ပဲလိုး ကြာရင်မျော့သွားမှာ ဒီအတိုင်းပဲလိုး ဆိုပြီး သတိလှမ်းပေးထားရတယ်။
ကိုထွန်းကလည်း တော်တော်သဘောကောင်းပြီး သည်းခံစိတ်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အဲ့တိုင်းပဲ တစ်ဖန်းဖန်းနဲ့ ဆက်တိုက်ဆောင့်တာ မိနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်လည်းကြာရော တစ်အီးအီးနဲ့ ပြီးသွားတယ်။ အေးမို့ကတော့ အော်ဟစ်ပြီး တစ်ဟင်းဟင်းနဲ့။ လူကြည့်တော့လည်း မျော့နေပြီ။ မောဟိုက်တုန်ရီနေတဲ့လေသံလေးနဲ့ “ရှင် ဆက်မလိုးနိုင်တော့ဘူးလား။ လိုးမယ် လာ လုပ်စမ်း။ လာ ဒီမှာ ကျွန်မစောက်ပတ်ကို လိုး၊ လုပ်စမ်းပါ လာ” ဟူး ဟူး အင်းးရှီးး“ကိုထွန်း ခင်‌ဗျားရသေးလား။ ရရင် ကွိုင်ယူထပ်စွပ်ပြီး ထပ်လုပ်ဗျာ။” ကျွန်တော့်စကားလည်း ကြားရော ကိုထွန်းက သူ့လီးကို ကွင်းထပ်တိုက်တယ်။ တော်တော်ကြာကြာတိုက်လိုက်မှ ပြန်ထလာတယ်ဗျာ။ ဒီလူလည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ နေမှာပေါ့။ ပြန်ထလာတာနဲ့ ကျွန်တော်က အေးမို့ကို သူ့ဆီတွန်းလွတ်လိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက ဆီးပြီး ဖက်ထားလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါကိုတောင် အေးမို့က ချက်ချင်းပြန်ရုန်းပြီး ရှင် သတ္တိမရှိဘူးလား။ လာ ငါကုန်းပေးမယ်။ လာ လိုးစမ်းးးဟင်း ဆိုပြီး ဆက်တီလက်တန်းကို လှမ်းထောက်ပြီး ခါးကုန်းပေးထားတာဗျာ။ သူ့ခါးကိုခွက်ထားပြီး ဖင်ကို ကော့ပေးထားတာ။ ကိုထွန်းလည်း အနောက်နေ ပစ်ဆောင့်တော့တာပေါ့ဗျာ။ ကိုထွန်းပစ်ဆောင့်‌လိုက်တိုင်း အသံစုံမြည်တမ်းရင်း အရှေ့ကို ဟတ်ထိုးလဲမလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ။ အေးမို့ရဲ့ အိုးလေးလည်းတုန်တုန်တက်သွားပြီး တစ်ဖန်းဖန်း ဆီးခုံနဲ့ရိုက်ခတ်သံ မြည်ဟီးနေတာ။
အား အား အား ဖြောင်း ဖန်း ‌ဗြောင်း အင့် အား ဖောင်း ဖန်းးအားးဆောင့်စမ်းပါ ဆောင့် အီးဟီးဟီးဟီး ဆောင့် အားး အေးမို့ ပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့ ငိုသံလေးတွေပါလာတယ်ဗျာ။ မျက်ရည်တွေ ပေါက်ပေါက်ကျလာတော့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဖောင်း ဖန်း ဖြောင်းးးဆိုတဲ့ ကိုထွန်းရဲ့ဆောင့်သံတွေလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း အားပျော့ပျော့လာတယ်။ သူ့ကို လှမ်းကြည့်တော့ ကျွန်တော့် လီး ကျိန်းစပ်နေပြီ အကိုတဲ့။ အကို ဝင်ပါတော့။ကျွန်တော် မရတော့ဘူး တဲ့၊ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထိတ်လန့်နေတာတော့ ဝန်ခံပါတယ်။မိန်းမကို စိုးရိမ်နေမိတာပါ။ ဒီလောက်ထိ အဆန်းတကြယ်ကြီး ကျွန်တော် မကြုံဖူးဘူးလေဗျာ။ ဟိုလူကလည်း ‌ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးနေရတာ ခုနှစ်ကြောင်း ရှစ်ကြောင်းလောက်ရှိတော့ ကျိန်းနေလောက်ပြီ။ အေးမို့ကတော့ ဆေးအရှိန်နဲ့ တင်းခံပြီး သွေးကြွနေတုန်းမို့ လူစိတ်ပျောက်နေလို့သာ ခံနိုင်တာ။ မနက်မိုးလင်းရင်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးရစရာမရှိအောင် ခံစားနေရမှာ။ ကျွန်တော် သောက်ထားတဲ့အရှိန်များသွားတာ‌ကြောင့်လား၊ မနက်ဖြန်အေးမို့ ဆေးပျယ်ချိန် မခံမရပ်နိုင်အောင် အောင့်အီးနာကျင်ရမှာကို စိုးရိမ်လို့လားမသိဘူး ကျွန်တော့်ဟာကို ပြန်ဆွပြီး စစ်ကူဝင်မလို့ဟာကို ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျွန်တော့်ဟာက မထလာတော့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော် ချွေးစေးတွေ ပြန်လာတယ်။တော်တော်ကြီးလက်ညောင်းအောင်ထုလိုက်မှ ထလာတယ်။ ကိုထွန်းကိုဖယ်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော်ဝင်လိုးတော့ ပြန်ပျော့ခွေသွားတယ်ဗျာ။ ဟိုလူကလည်း မခံစားနိုင်တော့လောက်အောင် ကျိန်းစပ်နေတာ။ အေးမို့က ကျွန်တော့်ကို တွန်းလှဲတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို အသားကုန်လာစုပ်တယ်။
သူတော်တော်စုပ်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ဟာ ထောင်လာတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် အပေါ်ကနေ တက်ခွပြီး ကျွန်တော့်ဟာကို သူ့အဖုတ်ထဲထိုးသွင်းရင်း ပါးစပ်က သံစုံအော်ဟစ်ကာ ဆောင့်ပါတော့တယ်။ ဘယ်လောက်ထိကြမ်းသလဲဆိုရင် သူ့ရဲ့ မိန်းမကိုယ်အဖုတ်ထဲက သွေးတွေတောင် စီးကျနေပါပြီ။ အထဲက သားအိမ်ကို တစ်ခုခုထိခိုက်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ အသိစိတ်ပျောက်ရင်း အော်ဟစ်သောင်းကျန်းကာ ကျွန်တော့်အပေါ်ကို တက်ဆောင့်နေတုန်း။ ကျွန်တော်လည်း သုံးလေးချီပြီးပါပြီ။ ဒါကိုတောင် မရပ်မနား ထပ်ဆောင့်နေတုန်း။ ကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ ညှိုးကျသွားတာနဲ့ ပြန်ဆွဲစုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဟာမှာလည်း သူ့သားအိမ်ထဲက စီးကျလာတဲ့သွေးတွေနဲ့။ သူဆွဲစုပ်တော့ သူ့ပါးစပ်မှာလည်း သွေးတွေရဲနေတာပဲ။ အရက်နှစ်မျိုးရယ် ‌စိတ်ကြွဆေးမှုန့်တွေရယ် ကာမဂုဏ်လိင်စိတ်တွေရယ် အကုန်ရောထွေးသွားတဲ့အခါ အင်မတန်နုနယ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက် စိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်။ ကိုထွန်းကတော့ ဘယ်အချိန်ကတည်းက လစ်ထွက်သွားတယ်မသိ။ အိမ်ထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။ ပြန်မာလာတဲ့ ကျွန်တော့်ဟာကို အပေါ်မှာနင်းကန်ဆောင့်ချရင်း အော်ဟစ်သောင်းကျန်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးသည်လေးကို ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းတွေချနေရတယ်။ နာရီကိုကြည့်တော့ လေးနာရီကျော်နေပါပြီ။ ဆေးအမြန်ပျယ်ပါတော့။ မိုးမြန်မြန်လင်းပါတော့။ ကိုကို့ကို ခွင့်လွတ်ပါ အေးမို့ရယ်။ နုနယ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကြမ်းတမ်းတဲ့လိင်အထိအတွေ့နဲ့မူးယစ်ဆေးတွေရဲ့ တိုက်စားမှုကြောင့် သတ္တဝါရိုင်းတစ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။သားအိမ်‌အတွင်းသား သွေးကြောနံရံတွေဟာ လိုတာထက်ပို ထိခိုက်ပါများရင် သွေးကြောပေါက်တာ နံရံပြိုတာတို့၊ သားအိမ်ခေါင်းကနေ သွေးတွေစီးကျလာတတ်တယ် လို့တော့ ကြားဖူးနားဝရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အေးမို့ ရာသီလာတာလား။ သူခံစားနေရတာတော့ အမှန်ပဲ။မနက်ကျရင် ဘယ်လောက်ထိ အောင့်နေ နာကျင်နေမလဲ ကျွန်တော်လည်း ရေရေရာရာမသိ။ ကြာလာတော့ ကျွန်တော့်ဟာလည်း မထောင်မတ်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။ သူ့ရဲ့မိန်းမကိုယ်ထဲက သွေးတွေလည်း အောက်မှာ ရွဲလို့။ သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို အားကုန်ဖက်ထားရင်း ကျွန်တော် ချုပ်ထားလိုက်တယ်။အေးမို့က မိန်းမအားနဲ့ တွန်းထိုးရုန်းကန်ပေမယ့် ကျွန်တော်မလွတ်ပေးဘူး။ သူ့ပုံစံက ဆံပင်တွေရှုပ်ပွ၊ မိတ်ကပ်တွေပျက်၊ ချွေးတွေ သွေးတွေရွဲနစ်လို့ သူရူးတစ်ယောက်ပမာ အော်ဟစ်နေတယ်။
သူတကယ် ရူးသွားပြီလား။ ဆေး အရှိန်ပျယ်ပါတော့။ အေးမို့မြန်မြန်အိပ်ပျော်ပါတော့။အချိန်တွေ မြန်မြန်ကုန် မိုးမြန်မြန်လင်းပါတော့။ တကယ်တော့ ကာမနွံလမ်းအသွားဟာ တရားလွန် မဆန်းပြားတာပဲ ကောင်းပါတယ်‌ဗျာ။ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးမှာ လိင်စိတ်သောင်းကျန်းပြီး ဘေးဥပဒ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ညတစ်ညကိုတော့ ကျွန်တော် မေ့ပျောက်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့မိန်းမ အေးမို့ရောပဲပေါ့။ အေးမို့ကိုကျွန်တော် ဆေးခန်းတော့ ပြပေးရမှာပါ။ လိုအပ်ရင်လည်း ဆေးရုံတက်၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကုန်ဗျာ။ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲသိတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ အသိစိတ်လွတ်နေတာကို ကျွန်တော် မကြည့်ရက်တော့ဘူးဗျာ။ ဆရာဝန်တွေကို ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ ပြောရပါ့မလဲဗျာ။ လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဘယ်လို သောက်ရှက်နဲ့ ပြောရပါ့မလဲ။အေးမို့ရော မနက်မိုးလင်းရင် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ဘယ်လိုကြည့်မလဲ။ ကျွန်တော့်ကို နာကျည်းသွားမှာလား။ သူ့အဖေအမေအိမ်ကိုပဲ ပြန်ပြေး‌သွားမှာလား။ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတွေတော့ ဖြစ်ကုန်ပါပြီဗျာ။ကျွန်တော်တို့နေရာမှာ ခင်‌ဗျားတို့ လင်မယားဆိုရင်ရော ……… ပြီးပါပြီ။
မေနှင်း ***** ( စ / ဆုံး )